စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်နှင့်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရောဂါများ (ICD-11) ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများ (2019) - Your Brain On Porn
YBOP ၏ထင်မြင်ချက်များ -“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ” အကြောင်းအပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါပြင်းထန်သောထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်တဲ့ဇွဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသို့မဟုတ်တိုကျတှနျးထား, ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစုအတွက်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလ (ဥပမာ, ခြောက်လသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ကျော်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရရှိလာတဲ့, လူမှုရေးဖြစ်ပါတယ် , ပညာရေး, လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကအခြားအရေးကြီးသောဒေသများ။
ဇွဲရှိရှိပုံစံ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသရုပ်သကန်များတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည် - ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးစီးပွားများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်တာ ၀ န်များကိုလျစ်လျူရှုသည့်တိုင်အောင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဘ ၀ ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်လာသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်သိသိသာသာလျှော့ချရန်မအောင်မြင်သည့်အားထုတ်မှုများစွာပြုလုပ်သူတစ် ဦး ချင်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်အဖြစ်ဆိုးရွားသည့်အကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ဆက်လက်ပါဝငျသူတစ် ဦး ချင်း; နှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းသည်စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိသည့်တိုင်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ဆက်လက်ပါဝင်နေသည်။
ဤအမြိုးအစားဖြစ်စဉ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဆင်တူသော်လည်းအဆိုပါရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါဝင်ဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့အဖို့ညီမျှရှိမရှိအပေါ်ပြတ်သားအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်း၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် ICD-11 ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်သည် နှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုလို့ဆိုချင်ပါတယ်လူနာရှာကြံကုသမှုလိုအပ်ချက်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်ခံရသော်လည်းတစ်ဦးချင်းစီအကြားအကူအညီရှာနဲ့ဆက်စပ်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေလျှော့ချဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးပါမည်50.
ရိဒ်, GM က, ပထမဦးစွာကို MB, Kogan, CS, Hyman, SE, Gureje, O. , Gaebel, ဒဗလျူ, ဗိုလ်မှူး, အမ်, Stein, DJ သမား, Maercker, အေ, Tyrer, P. နှင့် Claudino, အေ, 2019 ။
ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 18 (1), pp.3-19 ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလတွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံက ICD-11 အတည်ပြုချက်အရကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ICD-2019 မှ ICD-10 သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပြီးစနစ်အသစ်အပေါ်အခြေခံသည့်ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများကိုအစီရင်ခံတင်ပြမည် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂။ WHO ၏စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှု ဦး စီးဌာနသည် ICD ‐ 11 အတည်ပြုချက်အရ ICD ‐ ၁၁ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်နှင့် Neurodevelopmental Disorders ၏လက်တွေ့ဖော်ပြချက်နှင့် Diagnostic Guidelines (CDDG) ကိုထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ICD-1 CDDG ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လက်တွေ့အသုံး ၀ င်မှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုအခြေခံမူများအပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုခွဲခြားရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံ၊ ICD-2022 တွင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများတွင်တသမတ်တည်းနှင့်စနစ်တကျသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရောဂါတစ်ခုစီအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလမ်းညွှန်ချက်တို့ပါ ၀ င်သည်။ အထူးသဖြင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ရှုထောင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုများသည်လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအခြေခံသည့်ချဉ်းကပ်မှုများနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိသည်၊ ဤတွင် ICD ‐ ၁၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ICD ‐ 11 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြordersနာများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်နှင့်သက်ဆိုင်သော ICD ‐ 11 အခန်းကြီး ၂ ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ICD ‐ 11 တွင်ထည့်သွင်းထားသောအမျိုးအစားအသစ်များကိုပြသပြီး ၄ င်းတို့ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကိုတင်ပြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ICD-11 disorder grouping တစ်ခုစီတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ဆရာဝန်များနှင့်သုတေသီများအတွက် ICD to 11 နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေအနေများတွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးဝင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဇွန်လ 2018 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကပြန်လည်သုံးသပ်၎င်း၏ 11 အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များမှသေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါစာရင်းဇယားများအတွက်ရောဂါများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေးနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ (ICD-11) ၏ 194th တည်းဖြတ်မူတစ်ဦး Pre-နောက်ဆုံး version ကိုဖြန့်ချိခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့ပြင်ဆင်1။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံ, ရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များကနျြးမာရေး၏ဝန်ကြီးများပါဝင်သောမေလ 11 အတွက်၎င်း၏လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာ ICD-2019 အတည်ပြုမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များဇန်နဝါရီလ 10, 11 အပေါ်စတင် ICD-11 သုံးပြီး WHO ကမှကျန်းမာရေးစာရင်းဇယားများ၏အစီရင်ခံနှင့်တကွ, ICD-1 ဖို့ ICD-2022 ထံမှဖက်ပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်2.
WHO ၏စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှု ဦး စီးဌာနသည် ICD ‐ အခန်း (၁၁) ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ စိတ်ပိုင်း၊ အမူအကျင့်နှင့်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ခြင်းမမှန်ခြင်း၊ အာရုံကြောစနစ်၏ရောဂါများ; လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများ (WHO ၏မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်သုတေသန ဦး စီးဌာနနှင့် တွဲဖက်၍) ။
အဆိုပါ ICD-10, အ ICD ၏လက်ရှိဗားရှင်း၏စိတ်ရောဂါမျြးအခနျးကွီး, ဝေးနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစိတ်ရောဂါအရှိဆုံးအသုံးများခွဲခြားဖြစ်ပါသည်3။ အဆိုပါ ICD-10 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေး၏ WHO ကဦးစီးဌာနနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုဟာခွဲခြား၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းက၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းဆင်ခြင်၏။ စာရင်းအင်းအစီရင်ခံများအတွက် ICD-10 ၏ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီရောဂါအမျိုးအစားများအတွက်ရေတိုခက်ဆစ်အဘိဓာန်ကဲ့သို့သောအဓိပ္ပာယ်ပါရှိသည်, သို့သော်ဤလက်တွေ့ setting တွင်စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအသုံးပြုရန်မလုံလောက်သောဖြစ်စဉ်းစားခဲ့သည်4.
စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအဘို့, ဦးစီးဌာန ICD-10 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူ Disorders များအတွက်လက်တွေ့ဖော်ပြချက်များနှင့် Diagnostic လမ်းညွှန်ချက်များ (CDDG) ဖွံ့ဖြိုးပြီး4, အလွတ်သဘောယေဘုယျ, လက်တွေ့ပညာရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည် "အပြာစာအုပ်" အဖြစ်လူသိများ။ တစ်ဦးချင်းစီရောဂါများအတွက်အဓိကလက်တွေ့နှင့်ဆက်စပ် features တွေတစ်ဖော်ပြချက်တစ်ဦးယုံကြည်မှုရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအောင်အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေး Clinician အထောက်အကူပြုဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းကိုပို operationalized အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်ကစစ်တမ်းကနေသတင်းအချက်အလက်5 Clinician မှန်မှန် CDDG အတွက်ပစ္စည်းကိုသုံးပါနှင့်မကြာခဏတန်ပြန် Clinician သာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ငွေတောင်းခံရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရောဂါရှာဖွေ codes တွေကိုရယူ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခွဲခြားသုံးကြောင်းကျယ်ပြန့်ယုံကြည်ချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သည့်ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို, အောင်သည့်အခါစနစ်တကျကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါဦးစီးဌာန၏ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံအားဖြင့်ခြုံငုံစနစ်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအောက်ပါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ICD-11 တစ်ခုညီမျှ CDDG ဗားရှင်းထုတ်ဝေရန်ပါလိမ့်မယ်။
အထူးကြပ်မတ်အလုပ်၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက်ပို ICD-11 CDDG ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့သွားပြီ။ ဒါဟာအကြံပေးနှင့်အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်နှင့်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အကြောင်းအရာကျွမ်းကျင်သူများကရာပေါင်းများစွာအဖြစ် WHO ကအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ, ရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သိပ္ပံနည်းကျလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျယ်ပြန့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ICD-11 CDDG ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစဉ်အဆက်စိတ်ရောဂါတစ်ခုခွဲခြားများအတွက်အကောင်အထည်ဖော်အရှိဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ, ဘာသာပေါင်းစုံ, multidisciplinary နှင့်ပါဝင်သူတည်းဖြတ်မူဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ICD ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း CD ၁၁ CDDG - လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဦး စားပေးမှုများ
ကျနော်တို့ယခင်က ICD-11 CDDG ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်စည်းရုံးရေးနိယာမအဖြစ်လက်တွေ့ utility ကို၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြထားပါပြီ6, 7။ ကနျြးမာရေးခွဲခြားမှုကျန်းမာရေးတွေ့ဆုံနှင့်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်အကြား Interface ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကနျြးမာရေးတှေ့ဆုံများ၏အဆင့်မှာဆေးခန်းအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်မပေးပါဘူးတဲ့စနစ်ကသစ္စာရှိရှိ Clinician အားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်မည်မဟုတ်ပါထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးစနစ်ကမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချအတှကျအသုံးပွုအကျဉ်းချုပ်ကျန်းမာရေးတှေ့ဆုံဒေတာ, အမျိုးသားရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ခိုင်လုံသောအခြေခံမပေးနိုငျသညျ။
လက်တွေ့ utility ကိုထို့ကြောင့်ပြင်းထန်စွာ ICD-11 CDDG များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ content နှင့် ပတ်သက်. အကြံပြုချက်များအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု၏ WHO ကဦးစီးဌာနကခန့်အပ်ယေဘုယျအားဖြင့်ရောဂါအာဆီယံကစီစဉ်အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များတစ်စီးရီး, ပေးညွှန်ကြားချက်များတွင်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည် ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ICD ‐ 11 သည်လက်တွေ့အသုံး ၀ င်ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိခြင်းအပြင်သိပ္ပံနည်းကျခိုင်လုံသောဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်အဖွဲ့များသည် ICD-11 အတွက်အဆိုပြုချက်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခြေခံအနေဖြင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောရရှိနိုင်သည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လည်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ၏အရေးပါမှု6 လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန် Working Groups မှအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည် အုပ်စုများအားလုံးတွင် WHO၊ ကမ္ဘာ့အမေရိကဒေသများ၊ အာဖရိက၊ အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့မြေထဲပင်လယ်၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသများမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပြီးဝင်ငွေနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံများမှလူ ဦး ရေ၏ ၈၀% ကျော်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ8.
အဆိုပါ ICD-10 CDDG ၏ချို့ယွင်းချက်ရောဂါအုပ်စုဖြတ်ပြီးထောက်ပံ့ပစ္စည်းအတွက်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းခဲ့သည်9။ ICD-11 CDDG အတွက်အလုပ်အဖွဲ့များကိုရောဂါရှာဖွေမှုလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်အခြေခံပေးသောရောဂါတစ်ခုစီအတွက်ပုံမှန်နှင့်စနစ်တကျသတင်းအချက်အလက်များအပါအ ၀ င် ၄ င်းတို့၏အကြံပြုချက်များကို“ အကြောင်းအရာပုံစံများ” အဖြစ်တင်ပြရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အရင်ကအလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် ICD-11 အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံထုတ်ဝေခဲ့ကြ9။ အဆိုပါ ICD-11 CDDG အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးအားဖြင့် DSM-5 ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသိသိသာသာခေတဲ့ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်နှင့်များစွာသော ICD-11 အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု DSM-5 အလုပ်လုပ်သက်ဆိုင်ရာအုပ်စုများနှင့်အတူထပ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သည်။ ICD-11 အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များအတွက်လက်တွေ့ utility ကိုနှင့် DSM-5 များအတွက်တီထွင်ခံပစ္စည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကရည်မှန်းချက်တရားမျှတအယူအဆရေးရာကွဲပြားမှုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်သော်လည်း, ထို ICD-11 နှင့် DSM-5 အကြားကျပန်းသို့မဟုတ်မတရားကွဲပြားခြားနားမှု minimize ဖို့ဖြစ်တယ်။
THE ICD-11 CDDG ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
အဆိုပါ ICD-11 CDDG ၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဆရာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်ရောဂါအားလုံးကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်သူတွေကိုရောဂါလက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့အသီးအသီးရောဂါ၏မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, ဖော်ပြသူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များစာရင်းအပေါ်ယံရောဂါရှာဖွေစံတူနေချိန်တွင်ဤအမျက်မြင်လက်တွေ့နိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများဖြတ်ပြီးထူထောင်ခဲ့ကြသို့မဟုတ်သူတို့ကိုထည့်သွင်းရန်အခြားဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်ရှိမဟုတ်လျှင်, မတရား cutoffs နှင့်လက္ခဏာအရေအတွက်နှင့်ကြာချိန်နှင့်ပတ်သက်သောတိကျသောလိုအပ်ချက်များယေဘုယျအားဖြင့်, ရှောင်ရှားနေကြသည်။
ဤသည်ချဉ်းကပ် Clinician တကယ်လက်တွေ့တရားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လေ့ကျင့်ခန်းအတူ diagnoses စေနှင့်တင်ဆက်မှုအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမူကွဲအဖြစ်အဖြေရှာတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ Contextual နှင့်ကျန်းမာရေး-system ကိုအချက်များအဘို့အခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်လက်တွေ့ utility ကိုတိုးမြှင့်ဖို့လမ်းကိုမှကိုက်ညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစိတ်ရောဂါခွဲခြားစနစ်၏နှစ်လိုဖွယ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ICD-11 ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်စဉ်တွင်အစောပိုင်းဆောင်ရွက်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပညာရှင်၏စစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များကိုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်3, 10။ 13 နိုင်ငံများတွင်လက်တွေ့ setting တွင်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ Clinician ဒီချဉ်းကပ်မှု၏လက်တွေ့ utility ကိုမြင့်မားဖြစ်စဉ်းစားပါကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ11။ အရေးကြီးတာက, အ ICD-11 လမ်းညွှန်ချက်များ၏ရောဂါရှာဖွေယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်တင်းကျပ်သောစံနှုန်းများ-based ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. ရယူကြောင်းအဖြစ်ကအနည်းဆုံးအဖြစ်အဆင့်မြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော12.
အဆိုပါ ICD-11 CDDG အခြားတီထွင်မှုများ၏အရေအတွက်သည်လည်း (အကြောင်း, သည် "အကြောင်းအရာပုံစံ" ဖြစ်ပါတယ်) သူတို့၏ထောက်ခံချက်များအောင်အဘို့အအလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များမှပေးထားသော Template ကိုအားဖွငျ့မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်ထောက်ပံ့အချက်အလက်များ၏စံချိန်စံညွှန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပုံမှန်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူနှင့်အခြားရောဂါများ (differential ကိုရောဂါ) နဲ့နယ်နိမိတ်အပေါ်ပေးထားသောအချက်အလက်များ၏ချဲ့ထွင်ဖို့နယ်နိမိတ်များ၏စနစ်တကျစရိုက်လက္ခဏာတွေစီရောဂါဘို့ကျိန်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ICD-11 ဘို့မွေးစားအဆိုပါသက်တမ်းချဉ်းကပ်မှုစတင်ခြင်းများသောအားဖြင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်အတူအမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏သီးခြားအုပ်စုဖျက်သိမ်း, ဤပုံမမှန်သူတို့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမျှဝေပေးသောနှင့်အတူအခြားအုပ်စုများမှဖြန့်ဝေခဲ့ကွောငျးကိုဆိုလို၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါအုပ်စုဖွဲ့အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related မမှန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ICD-11 CDDG တစ်ဦးချင်းစီရောဂါအတှကျအခကျြပေးနှင့် / သို့မဟုတ် data ကိုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအဖြစ်အဟောင်းတွေလူကြီးများအကြားတွင်အဆိုပါရောဂါ၏တင်ဆက်မှုအတွက်မူကွဲဖော်ပြရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာအုပ်စုဖွဲ့။
ယဉ်ကျေးမှု-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်စနစ်တကျ psychopathology နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ ICD-11 အဖြေရှာတဲ့အုပ်စုအဖြစ် ICD-10 CDDG နှင့် DSM- အတွက်ယဉ်ကျေးမှု-related ပစ္စည်းအသေးစိတ်ပြန်သုံးသပ်ယင်း၏စကားရပ်အပေါ်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်စာပေ၏သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီးထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်5။ ထိတ်လန့်ရောဂါများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုလမ်းညွှန်မှုစားပွဲတင်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် 1 ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်။
စားပွဲတင် 1 ။ ထိတ်လန့်ရောဂါများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုထည့်သွင်းစဉ်းစား
ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုများ၏လက္ခဏာတင်ဆက်မှုသူတို့၏ဇာစ်မြစ်သို့မဟုတ် pathophysiology အကြောင်းကိုယဉ်ကျေးမှုအရည်အသွေးများကလွှမ်းမိုးယဉ်ကျေးမှုကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကမ္ဘောဒီးယားမူရင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ dysregulation မှစွပ်စွဲထိတ်လန့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအလေးပေးစေခြင်းငှါ khyâlရိုးရာကမ္ဘောဒီးယား ethnophysiology အတွက်တစ်ဦးလေတိုက်တူသောဥစ္စာ (ဥပမာ, မူးဝြေခင်း, tinnitus, လည်ပင်းနာကျင်ခြင်း) ။
တိကျသောလူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်. etiological အရည်အသွေးများမှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်လင့်ထားသည်ရသောရောဂါစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲများစွာမှတ်သားလောက်ယဉ်ကျေးမှုအယူအဆရှိပါတယ်။ ဥပမာလူ့ပဋိပက္ခ (ဥပမာနှင့်ဆက်စပ်သောအရည်အသွေးများပါဝင်သည်, ataque က de nervios ) လက်တင်အမေရိကလူတို့တွင်, ခေတ္တခဏသို့မဟုတ် orthostasis (khyâlဦးထုပ် (ကမ္ဘောဒီးယား) အကြားနှင့်လေထုလေတိုက်Trung gió ) ဗီယက်နမ်တစ်ဦးချင်းစီအကြား။ ဤရွေ့ကား, ယဉ်ကျေးမှုတံဆိပ်များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ထိတ်လန့် (ဥပမာ, အမျက်ဒေါသ paroxysms ထက်အခြားတင်ပြချက်များရောဂါလက္ခဏာတွေမှလျှောက်ထားစေခြင်းငှါ ataque က de nervios) ဒါပေမဲ့သူတို့မကြာခဏထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စဉ်ထပ်နှင့်အတူထိတ်လန်ဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်တင်ပြချက်များပါဝင်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အတွေ့အကြုံဆက်စပ်ရှင်းလင်းထားသည့်ထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုထိတ်လန့်ရောဂါအတွက်ကိစ္စတွင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်မျှော်လင့်ထားသည့်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်မထားတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်ရှိမရှိအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုက်ခိုက်မှုများကိုပိုကောင်းအခြားရောဂါ (လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက်ဥပမာ, လူမှုရေးအခြေအနေများ) ကရှင်းပြခဲ့ကြသည်ကို စိုးရိမ်. ၏တိကျသော foci ပါဝင်နိုင်စိုးရိမ်ထိတ်လန်။ တိကျတဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်အတူကို စိုးရိမ်. အာရုံ၏ထို့ပြင်ယဉ်ကျေးမှုချိတ်ဆက် (ဥပမာ, လေတိုက်သို့မဟုတ်အအေးမိခြင်းနှင့် Trung gió ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုများ) တစ် ဦး ချင်း၏ယဉ်ကျေးမှုမူဘောင်အတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါစူးရှသောစိုးရိမ်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါ ICD-11 ခွဲခြားအတွက်နောက်ထပ်အဓိကဆန်းသစ်တီထွင်မှုတိကျတဲ့ taxonomic သတ်နဲ့အတိအလင်းအမျိုးအစားစနစ်၏အခြေအနေတွင်အတွင်းရှုထောင်ချဉ်းကပ်၏ဆွဲသွင်းပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအများဆုံးစိတ်ရောဂါအကောင်းဆုံးအပြန်အလှန်လက္ခဏာရှုထောင့်များစွာတလျှောက်တွင်ဖော်ပြထားထက် discrete အမျိုးအစားအဖြစ်နိုင်အထောက်အထားအားဖြင့်နှိုးဆွခဲ့သည်13-15, ထို ICD-11 များအတွက်နိုင်တဲ့ coding ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်တီထွင်မှုများကလွယ်ကူချောမွေ့လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ICD-11 ၏ရှုထောင်အလားအလာအရှိဆုံးရှင်းလင်းစွာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်များ၏ခွဲခြားအတွက်သဘောပေါက်နေသည်16, 17.
အထူးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သူများအတွက် ICD personality ၁၁ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှု၏အတိုင်းအတာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်တိကျသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာပြordersနာများ ICD ‐ 11 ခွဲခြားခြင်း၊ ပိုမိုရိုးရှင်းသောကုသမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှုပ်ထွေးမှုလိုအပ်သူလူနာများအားပိုမိုကွဲပြားသောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုတို့ကိုပေးသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအပြောင်းအလဲများကိုခြေရာခံများအတွက်ယန္တရား။ ပိုပြီးအထူးပြု setting တွင်, တစ် ဦး ချင်းစီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ကြယ်သီးခြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းဗျူဟာအသိပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရှုထောင်စနစ်ကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်များ၏အတု comorbidity နှင့်သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ diagnoses နှစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါသရုပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ခံအတိုင်းအတာများနှင့်ကြားဝင်သို့သုတေသနများအတွက်အခြေခံပေး။
schizophrenia နှင့်အခြားအဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏လက်ခဏာကိုဖော်ပြရန်ရှုထောင်ခြေစစ်ပွဲများကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။18။ အဲဒီအစားအဖြေရှာတဲ့ Subtype အာရုံစိုက်ထက်, ရှုထောင်ခွဲခြားပိုပြီးပြန်လည်နာလန်ထူ-based စိတ်ရောဂါပြန်လည်ထူထောင်ရေးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာလက်ရှိလက်တွေ့တင်ဆက်မှု၏သက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်အပေါ်အလေးပေး။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ခြင်းနှင့်မူလတန်း psychotic မမှန်၏လက်ခဏာသရုပ်ရန်ရှုထောင်ချဉ်းကပ်နောက်ပိုင်းတွင်ဤစာတမ်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ICD-11 FIELD တွင်အံ
အဆိုပါ ICD-11 လယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေအစီအစဉ်ကိုလည်းအဓိကဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ဧရိယာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အလုပ်၏ဤအစီအစဉ်ကို ICD-10 နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် Clinician အားဖြင့်လျှောက်လွှာ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအပါအဝင်မူကြမ်းအဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များ၏လက်တွေ့ utility ကိုလေ့လာနေဘို့ဝတ္ထုနည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်မဆိုလေ့လာရှုပ်ထွေးမှုများများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်တိကျသောဒြပ်စင်ပါဝင်သည်ထားပါတယ်19။ သုတေသနအစီအစဉ်၏အဓိကတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအရှိဆုံးလေ့လာမှုများ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုမဆိုလေ့လာအားနည်းချက်များကိုဖြေရှင်းရန်လမ်းညွှန်၏တည်းဖြတ်မူများအတွက်အခြေခံများကိုခွင့်ပြုမယ့်အချိန်ဘောင်အတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြကြောင်းခဲ့ပြီ20.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါဝင်မှုကိုလည်း ICD-11 CDDG လယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေ program ၏ defining ဝိသေသဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Global လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကွန်ယက် (GCPN) အင်တာနက်ကို-based လယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေကတဆင့် ICD-11 CDDG ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများခွင့်ပြုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
အချိန်ကျော်, အ GCPN 15,000 နိုင်ငံများမှနီးပါး 155 Clinician ထည့်သွင်းရန်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေသများတွင်အဓိကအားအကြီးဆုံးအချိုးအစားဟာအပေါ်အာရှ, ဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အညီအမျှတလက်အပေါ်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတို့အကြားအပိုင်းပိုင်းခွဲနဲ့လက်တင်အမေရိကကနေလာမယ့်အတူဒေသအားဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၏ရရှိမှုကိုခြေရာခံကြောင်းအချိုးအစားအတွက်ကိုယ်စားပြုနေကြသည် WHO ကအားလုံး ) အခြား။ ပိုများသော GCPN အဖွဲ့ဝင်ထက်ဝက်ကျော်အများစု, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ဆေးသမားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, 30% စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ကြသည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဒါဇင် GCPN လေ့လာမှုများသော့ချက်ကွဲပြားခြားနားမှုစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးကိုင်စံချိန်စံညွှန်းမီကိစ္စတွင်ပစ္စည်းသုံးပြီးအများဆုံး Clinician '' ရောဂါရှာဖွေဖော်မြူလာ၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ ICD-11 လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူအဆိုပြုထား ICD-10 အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များ၏နှိုင်းယှဉ်အာရုံစိုက်, ယနေ့အထိပြီးစီးခဲ့ပြီ19, 21။ တခြားလေ့လာမှုအဖြေရှာတဲ့ခြေစစ်ပွဲများအတွက်ချုံ့ချဲ့လေ့လာခဲ့ကြ22 နှင့် Clinician အမှန်တကယ်ခွဲခြားမှုကိုအသုံးပြုဖို့ကိုဘယ်လို5။ GCPN လေ့လာမှုများအင်္ဂလိပ်အပြင်, တရုတ်, ပြင်သစ်, ဂျပန်, ရုရှားနှင့်စပိန်ကောက်ယူခဲ့ကြနှင့်အလားအလာရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလျှောက်လွှာအခက်အခဲများအဖြစ်ဘာသာပြန်ချက်အတွက်ပြဿနာများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်ဒေသနှင့်ဘာသာစကားအားဖြင့်ရလဒ်တစ်ခုစာမေးပွဲပါဝင်သည်ပါပြီ။
ဆေးခန်း-based လေ့လာမှုများကိုလည်းသူတို့အသုံးပြုသောခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် setting များအတွက်, သဘာဝအခြေအနေများအတွက်အဆိုပြုထား ICD-11 အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များ၏လက်တွေ့ utility ကိုနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အကဲဖြတ်ဖို့, နိုင်ငံတကာလယ်ပြင်လေ့လာမှုစင်တာများ၏ကွန်ယက်မှတဆင့်ကောက်ယူခဲ့ကြ11။ ဒီလေ့လာမှုတွေလည်းရောဂါဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးချ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအချိုးအစားအဘို့အကောင့်တစ်ခုကို diagnoses များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရအကဲဖြတ်12။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေအားလုံး WHO ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေသများဖြတ်ပြီး 14 နိုင်ငံများတွင်တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်, ထိုလေ့လာမှုများအဘို့စိတ်ရှည်အင်တာဗျူးတစ်ခုစီကိုနိုင်ငံ၏ဒေသခံဘာသာစကားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အပြုအမူနှင့် NEURODEVELOPMENTAL disorders အပေါ် ICD-11 အခနျး၏အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံ
အဆိုပါ ICD-10 ခုနှစ်, မမှန်အုပ်စုများ၏နံပါတ်သူတွေဟာကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်အပေါ်အခန်းအတွင်းပုံမမှန်ဆယ်အဓိက Group ၏အများဆုံးရှိသည်ဖို့သာဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, အဆိုပါခွဲခြားအတွက်အသုံးပြုသောဒဿမနိုင်တဲ့ coding စနစ်ဖြင့်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ရလဒ်အဖြစ်အဖြေရှာတဲ့အုပ်စုလက်တွေ့ utility သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား (ဥပမာ, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန် neurotic, စိတ်ဖိစီးမှု-related နှင့် somatoform မမှန်များ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားကြောင်း) အပေါ်အခြေမခံခဲ့နေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားနှင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အပေါ်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်အခြေစိုက်အဖြေရှာတဲ့အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အောင်, Group ၏တာပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အက္ခရာနံပါတ်ပါတဲ့နိုင်တဲ့ coding ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ICD-11 ရဲ့အသုံးပြုခြင်း။
ပိုပြီးဆေးခန်းအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့ဒေတာများကိုနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ခုပုံစံအကွက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည်23, 24 စိတ်ရောဂါတို့တွင်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအားဖြင့်ကျင်းပသည့်အယူအဆရေးရာဆန်းစစ်ရန်။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကိုခွဲခြား၏အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ICD-11 အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလည်း DSM-11 ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်ပေါ်တွင် ICD-5 အခန်းတစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းပုံကိုက်ညီဖို့ WHO ကနှင့်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကအားထုတ်မှုကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာ ICD-10 အခန်းကြီးကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည် Kraepelin ၏စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာပြဌာန်းစာအုပ်၌အသုံးပြုခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုအဓိကထင်ဟပ်စေပြီး၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ရောဂါများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းနောက်တွင်စိတ်ရောဂါ၊25။ အဆိုပါ ICD-11 အဖွဲ့အစည်းကလမ်းညွှန်အခြေခံမူများအထူးသမမှန်, ဥပမာ (ကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ကအောက်ပါပုအဖြေရှာတဲ့အုပ်စုအမိန့်ဖို့ကြိုးစားနေ (ဤအရပ်, neurodevelopmental မမှန်သည့်ခွဲခြားအတွက်နောက်ဆုံးပထမနှင့် neurocognitive မမှန်ပေါ်လာ) နှင့် putative က Shared etiological နှင့် pathophysiological အချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအတူတကွမမှန်အုပ်စုဖွဲ့ပါဝင်သည် စိတ်ဖိစီးမှု) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် shared phenomenology (ဥပမာ dissociative မမှန်) နဲ့ဆက်နွယ်။ စားပှဲ2, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်ပေါ်တွင် ICD-11 မျြးအခနျးကွီးအတွက်ရောဂါရှာဖွေ Group ၏တစ်ဦးစာရင်းပေးစွမ်းသည်။
စားပွဲတင်2။ , စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်ပေါ်တွင် ICD-11 ခနျးမှာရောဂါအုပ်စု
Schizophrenia နှင့်အခြားမူလတန်း psychotic မမှန်
နှောင့်အယှက်အပြုအမူနှင့် dissocial မမှန်
ကိုယ်ဝန်, ကလေးမွေးဖွားနှင့် puerperium နှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်
တခြားနေရာခွဲခြားမမှန်သို့မဟုတ်ရောဂါများနဲ့ဆက်စပ် secondary စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပြုအမူ syndrome
အဆိုပါ ICD-10 အတွက်အိပ်စက်ခြင်းမမှန်များ၏ခွဲခြားခြင်း, ICD-10 ၏စိတ်ပိုင်းနှင့်အမူအကျင့်မမှန်အပေါ်အခန်းတွင်ထည့်သွင်းခံရမှာ "Non-အော်ဂဲနစ်" အိပ်စက်ခြင်းပုံမမှန်မှု, အော်ဂဲနစ်နှင့် Non-အော်ဂဲနစ်မမှန်အကြားယခုပေါရာဏခွဲခြာအပေါ်မှီခို နှငျ့ "အော်ဂဲနစ်" အိပ်စက်ခြင်းမမှန်သည်အခြားအခန်းကြီး (ဆိုလိုသည်မှာ, အာရုံကြောစနစ်, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်၏ရောဂါများနှင့် endocrine ၏ရောဂါများ, အာဟာရနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်မမှန်) တွင်ထည့်သွင်းထားကြောင်း။ ICD-11 ခုနှစ်တွင်သီးခြားမျြးအခနျးကွီးအားလုံးသက်ဆိုင်ရာအိပ်ပျော်ခြင်း-related diagnoses လွှမ်းခြုံကြောင်းအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားမမှန်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ICD-10 လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်အပေါ်အခန်းတွင်ထည့်သွင်း "Non-အော်ဂဲနစ်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်စာရင်းအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက် "အော်ဂဲနစ်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ဘုံထဲမှာအော်ဂဲနစ်နှင့် Non-အော်ဂဲနစ်အကြားတစ်ဦး dichotomy ခံပြီး အဆိုပါ genitourinary စနစ်၏ရောဂါများအပေါ်အခနျးမှာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများများအတွက်အသစ်ဘက်ပေါင်းစုံမျြးအခနျးကွီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုမမှန်တစ်စုစည်းခွဲခြားအမျိုးမျိုးဖို့ ICD-11 ပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီ26 အဖြစ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှုများ။ ထိုမှတပါး, ICD-10 ကျားမဝိသေသလက္ခဏာမမှန်သည့် ICD-11 ထဲမှာ "ကျားမ incongruence" အဖြစ်အမည်ပြောင်းနှင့်အသစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခန်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမျြးအခနျးကွီးကနေပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ26တစ်ဖက်လိင်ဝိသေသလက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်မဟုတ်တော့ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်။ နိုင်ငံအများအပြားအတွက်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများမှရယူသောကွောငျ့ကျား incongruence အဆိုပါ ICD-11 အတွက်ဖျက်သိမ်းရေးများအတွက်အဆိုပြုထားသည်မဟုတ်တစ်ခြေစစ်ပွဲရောဂါအပေါ်ဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ICD-11 လမ်းညွှန်ချက်များအတိအလင်းတစ်ဦးတည်းကြောင့်ကျားမမူကွဲအပြုအမူများနှင့်ဦးစားပေးဖော်ပြနေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအောင်များအတွက်လုံလောက်သောမရှိကြပေ။
THE ICD-11 IN NEW စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အပြုအမူနှင့် NEURODEVELOPMENTAL disorders
သိပ္ပံနည်းကျတရားဝင်မှုအပေါ်ရရှိနိုင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်လက်တွေ့ utility ကိုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ၏တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်အခြေခံပြီး, သစ်ကိုမမှန်တစ်အရေအတွက်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်ပေါ်တွင် ICD-11 အခန်းကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ အဆိုပါ ICD-11 အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်ကဤပုံမမှန်များ၏ဖော်ပြချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ICD-10 ခုနှစ်, catatonia schizophrenia များ၏ Subtype တဦး (ဆိုလိုသည်မှာ catatonic schizophrenia) အဖြစ်နှင့်အော်ဂဲနစ်မမှန် (ဆိုလိုသည်မှာ, အော်ဂဲနစ် catatonic ရောဂါ) ၏တစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်သည်ခဲ့သည်။ catatonia ၏ syndrome ရောဂါစိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုအတွက်27, (စသည်တို့ကိုစိတ်ဓါတ်များမမှန်, စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်-related မမှန်, ကဲ့သို့တူညီသော hierarchical အဆင့်မှာ) catatonia အသစ်တစ်ခုအဖြေရှာတဲ့အာဆီယံဟာ ICD-11 အတွက်ထည့်ထားပြီးပါပြီ။
Catatonia ထိုကဲ့သို့သော stupor, catalepsy, waxy ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, mutism, negativism, ခရီးစဉ်, ထုံးစံ, stereotypies, psychomotor လှုံ့ဆော်မှု, grimacing, echolalia နှင့် echopraxia အဖြစ်အတော်ကြာရောဂါလက္ခဏာများ၏ဖြစ်ပျက်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးအခြေအနေများသစ်ကိုအဖြေရှာတဲ့အုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်: အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓါတ်များရောဂါ, schizophrenia သို့မဟုတ်အခြားမူလတန်း psychotic ရောဂါအဖြစ်ရောဂါ (သို့မဟုတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုဖရိုဖရဲနဲ့ဆက်စပ်တဲ့) catatonia); ခ) ဆေးဝါးများ (ဥပမာ antipsychotic ဆေးဝါးများ, အမ်ဖီတမင်း, phencyclidine) အပါအဝင် psychoactive တ္ထုများဖြင့်သွေးဆောင် catatonia; နှင့်ဂ) အလယ်တန်း catatonia (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးဆေးကုသမှုအခြေအနေများကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောဆီးချို ketoacidosis, hypercalcemia, Hepatic encephalopathy, homocystinuria, neoplasm, ဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာ, cerebrovascular ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် encephalitis ကဲ့သို့) ။
bipolar အမျိုးအစား II ကိုရောဂါ
DSM-IV သည်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စိတ်ကြွဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် II ၏ရောဂါမှာအနည်းဆုံး hypomanic ဇာတ်လမ်းတွဲအနည်းဆုံးအဓိကစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်သော်လည်းစိတ်ကြွအမျိုးအစား I ရောဂါသည်အနည်းဆုံး Manic ဇာတ်လမ်းတွဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတင်ပြချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားနှစ်မျိုးအကြားခွဲခြားမှု၏တရားဝင်မှုကိုထောက်ခံသည့်အထောက်အထားတွင်စိတ်ကျဆေးသွင်းကုသမှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကွဲပြားမှုများပါ ၀ င်သည်28, neurocognitive အစီအမံ28, 29, မျိုးဗီဇဆိုးကျိုးများ28, 30နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်28, 31, 32.
ဒီအထောက်အထားများနှင့်, ဤနှစ်မျိုးအကြားကွာခြား၏လက်တွေ့ utility ကိုပေးထား33, ICD-11 အတွက်စိတ်ကြွရောဂါကိုလည်း type ကိုငါနှင့်အမျိုးအစား II ကိုစိတ်ကြွရောဂါခွဲခြားထားသည်။
ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ
ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အခြားသူများ unnoticeable သို့မဟုတ်သာအနည်းငယ်သိသာဖြစ်စေဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အတွက်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ်အပြစ်အနာအဆာတွေနဲ့သာအာရုံစိုနေကြတယ်34။ အဆိုပါအဆက်မပြတ်ပြောက်ကျားမှအလွန်အကျွံကြိုးစားမှု, အရိပ်မိအပြစ်အနာအဆာသို့မဟုတ်အပြစ်အနာအဆာ၏အသွင်အပြင်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှု၏ထပ်ခါတလဲလဲစာမေးပွဲအပါအဝင်ထပ်တလဲလဲနှင့်အလွန်အကျွံအပြုအမူတွေကလိုက်ပါသွားဒါမှမဟုတ်ရိပ်မိချွတ်ယွင်းပြောင်းလဲဒါမှမဟုတ်ရိပ်မိအပြစ်အနာအဆာနှင့် ပတ်သက်. ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းလူမှုရေးအခြေအနေများသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်း၏ရှောင်ရှားမှတ်သားနေသည် သို့မဟုတ်အပြစ်အနာအဆာ။
မူလက "dysmorphophobia" ဟုခေါ်, ဒီအခွအေနေပထမဦးဆုံး DSM-III ကို-R တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာ hypochondriasis အောက်မှာ Embed လုပ်ထားတဲ့ပေမယ် incongruous ပါဝင်သက်တမ်းအဖြစ် ICD-10 ထင်ရှားပေမယ့် Clinician ဆက်စပ်ယုံကြည်ချက်လှညျ့စဉ်းစားခဲ့ကြရသောကိစ္စများတွင်လှညျ့ရောဂါကြောင့်ရောဂါမှညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်သူတို့ကျင်းပကြသည်သောခံယူချက်သို့မဟုတ် fixity ၏ဒီဂရီမှလှညျ့ပေါ်လာသောယုံကြည်ချက်တို့ပါဝင်သည်နိုင်သည့်တူညီရောဂါအဆိုပါရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုအပြည့်အဝ spectrum ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲကွဲပြားခြားနားသော diagnoses တာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့, များအတွက်အလားအလာဖန်တီးခဲ့သည်။
ယင်း၏ကွဲပြား symptomatology, compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါ (OCRD) မှအထွေထွေလူဦးရေနှင့်တူညီအတွက်ပျံ့နှံ့၏အသိအမှတ်ပြုမှုမှာတော့ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါကို ICD-11 ၌ဤအဆုံးစွန်သောအုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်35.
ဤအခြေအနေမှတရိပ်မိပုပ်သို့မဟုတ်ထိုးစစ်ခန္ဓာကိုယ်အနံ့သို့မဟုတ်အသက်ရှု emitting သောယုံကြည်ချက်နှင့်အတူတစ်ဦး persistent အတွက်အဆက်မပြတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, ထိုအခြားသူများ unnoticeable သို့မဟုတ်သာအနည်းငယ်သိသာဖြစ်စေဖြစ်ပါသည်34.
သူတို့ရဲ့အဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောထပ်တလဲလဲခန္ဓာကိုယ်အနံ့များအတွက်စစ်ဆေးနေဒါမှမဟုတ်အနံ့များရိပ်မိအရင်းအမြစ်စစ်ဆေးနေအဖြစ်ထပ်တလဲလဲနှင့်အလွန်အကျွံအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ; အကြိမ်ကြိမ်အာမခံရှာကြံ; ပြောက်ကျားမှအလွန်အကျွံကြိုးစားမှု, အရိပ်မိအနံ့ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တားဆီး; ဒါမှမဟုတ်ရိပ်မိပုပ်သို့မဟုတ်ထိုးစစ်အနံ့အကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းလူမှုရေးအခြေအနေများသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်း၏ရှောင်ရှားမှတ်သား။ ထိခိုက်နစ်နာတစ်ဦးချင်းစီပုံမှန်အားကြောက်ရွံ့ရိုသေဒါမှမဟုတ်အနံ့ကိုသတိပွုမိအခြားသူတွေကသူတို့ကိုငြင်းပယ်သို့မဟုတ်အရှက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေကြသည်36.
Olfactory ရည်ညွှန်းမှုရောဂါသည် ICD-11 OCRD အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော preoccupations နှင့်ဆက်နွယ်သောထပ်ခါတလဲလဲအပြုအမူများရှိနေခြင်းနှင့်အတူဤအုပ်စုအတွင်းရှိအခြားရောဂါများနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များကိုတူညီသည်။35.
သိုလှောင်ရောဂါမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကြောင့်သူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံဝယ်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်အခက်အခဲသူတို့ကိုပယ်ရန်, ပစ္စည်းဥစ္စာများစုစည်းနေခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်35, 37။ အလွန်အကျွံဝယ်ယူပစ္စည်းများစာစုဆောငျးသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်နှင့်ဆက်စပ်သောထပ်တလဲလဲရမ္မက်သို့မဟုတ်အပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲဖယ်ထုတ်ပစ္စည်းများနှင့်သူတို့ကိုပယ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုကယ်တင်မယ့်ရိပ်မိရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အသကျရှငျနေရာများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာရလဒ်များကိုများစုစည်းနေခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်မချရသောသောအချက်မှရှုပ်ပွနေအောင်ဖြစ်လာ။
သိုလှောင်ခြင်းအပြုအမူများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမမှန်မှုများနှင့်အခြားအခြေအနေများတွင်ပြသခြင်းခံရနိုင်သော်လည်း - စိတ်ဖိစီးမှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်ရောဂါများ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိသောရောဂါများ၊ schizophrenia၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၊ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါနှင့် Prader-Willi ရောဂါများအပါအဝင် - သိုလှောင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောအထောက်အထားများရှိသည်။ သီးခြားနှင့်ထူးခြားသောရောဂါအဖြစ်ရောဂါ38.
သိုလှောင်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများသည် ICD and 11 တွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှစောဒကတက်သည်။39.
အသစ်အဖြေရှာတဲ့လူမျိုးကွဲ, ခန္ဓာကိုယ်-အာရုံစူးစိုက်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူမမှန်ခြင်း, OCRD အုပ်စုပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီ။ ဒါဟာ (အလေ့အထနှင့် ICD-10 အတွက်အရင်းခံတွန်းအားမမှန်များ၏အာဆီယံတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သော) trichotillomania အသစ်တစ်ခုအခွအေနေ, (လည်းအသားအရေ-Pick ရောဂါအဖြစ်လူသိများ) excoriation ရောဂါပါဝင်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါသည်လူတစ် ဦး ၏တစ်ကိုယ်ရေအရိပ်များကိုပြန်လည်စုဆောင်းခြင်း၊ အရေပြားကိုထိခိုက်စေခြင်း၊ အမူအကျင့်ကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်မအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အသားအရေကောက်ယူခြင်းသည်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသိသိသာသာစိတ်သောကရောက်စေမှုသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေရန်အလုံအလောက်ပြင်းထန်ရမည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရောဂါ (နှင့် trichotillomania) သည်အခြား OCRD များနှင့်ကွဲပြားသည်။ အပြုအမူသည်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအတွေးများ၊ စွဲလမ်းမှုများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစသည့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းအာရုံခံအတွေ့အကြုံများကရှေ့ပြေးဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ OCRD အုပ်စုမှာသူတို့ရဲ့ပါဝင် shared phenomenology, မိသားစုစုစည်းမှု၏ပုံစံများ, ဤအုပ်စုတွင်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ putative etiological ယန္တရားများအပေါ်အခြေခံသည်35, 40.
ရှုပ်ထွေးသော Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (ရှုပ်ထွေးသော PTSD)41 အများဆုံးပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကြာရှည်သဘာဝတရား၏ပြင်းထန်သောဖိအားများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း, ကျွန်ပြုမှု, လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ, အချိန်ကြာမြင့်စွာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ခက်ခဲသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထားတဲ့ထွက်ပေါက်ကနေမျိုးစုံသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ, အောက်ပါအတိုင်း။
အဆိုပါလက္ခဏာပရိုဖိုင်းကို PTSD ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်သုံးခု (ဥပမာဆိုလိုသည်မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သောမှတ်ဥာဏ်များ၊ ပြန်လည်အမှတ်တရပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အိပ်မက်ဆိုးများဖြင့်ပြန်လည်တွေ့ကြုံခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ အခြေအနေများ၊ အတွေးများနှင့်အမှတ်တရများကိုရှောင်ရှားခြင်း) ကိုမှတ်သားထားသည်။ သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်ကိုလူများသတိပြုမိခြင်း၊ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်လက်ရှိခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်စွဲမြဲထင်မြင်ယူဆချက်များ) ကို ထပ်မံ၍ ထပ်မံစွဲမြဲ၊ နေရာအနှံ့နှင့်ထိရောက်သောအနှောင့်အယှက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊
အဆိုပါ ICD-11 မှရှုပ်ထွေး PTSD ၏ထို့အပြင်အဆိုပါရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ PTSD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှနှိုင်းယှဉ်ပါကကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအနေဖြင့်တစ်ဦးဆင်းရဲတဲ့ဟောကိန်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်သောသက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာတရားမျှတဖြစ်ပါသည်42။ ရှုပ်ထွေးသော PTSD ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်အမြဲတည်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲမှုထပ် ICD-10 အမျိုးအစားအစားထိုး41.
အချိန်ကြာမြင့်စွာဝမ်းနည်းခြင်းရောဂါဝမ်းနည်းပူဆွေးဖို့သညျ့ persistent နှင့်ကို disable တုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြထားတယ်41။ အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိဘ၊ ကလေးသို့မဟုတ်သေဆုံးသွားသူနှင့်နီးစပ်သူတစ် ဦး သေဆုံးပြီးနောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုများနှင့်အတူကွယ်လွန်သူသို့မဟုတ်မြဲမြံသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုတောင့်တခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပျံ့နှံ့နေသည့်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတုန့်ပြန်မှုရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင် ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အပြစ်တင်ခြင်း၊ သေခြင်းကိုလက်ခံရန်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ တစ် ဦး ချင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားချက်များကိုခံစားနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတုံ့ပြန်မှုသည် (၆ လကျော်) အရှုံးပေါ်ပြီးနောက်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲရှည်လျားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိဆက်လက်တည်ရှိနေရမည်ဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး ချင်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြေအနေအတွက်မျှော်မှန်းထားသည့်လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်ဘာသာရေးစံနှုန်းများကိုရှင်းလင်းစွာကျော်လွန်သွားရမည်။
လူအများစုဝမ်းနည်းပူဆွေးအောက်ပါန်းကျင်ခြောက်လအားဖြင့်စူးရှသောဝမ်းနည်းခြင်း၏နာကျင်မှုမှအနည်းဆုံးတစိတ်တပိုင်းလွှတ်သတင်းပို့သော်လည်း, ပြင်းထန်ဝမ်းနည်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုကြုံနေရဆက်လက်သောသူတို့မူကားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုများပါတယ်။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဝမ်းနည်းခြင်းရောဂါများ၏ပါဝင်မှုလုံလောက်စွာလက်ရှိ ICD-10 diagnoses ဖွငျ့ဖျောပွထားမဟုတ်ကြောင်းတစ်ကွဲပြားနှင့် debilitating ခွအေနအေ၏တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်43။ ယဉ်ကျေးမှုအစံတန်ဖိုးဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဇာတ်လမ်းတွဲထဲကနေက၎င်း၏ပါဝင်မှုများနှင့်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်းကြောင့်ဤအဆုံးစွန်သောရောဂါ၏ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုရွေးချယ်ရေးသက်ရောက်မှုနှင့် prognoses ၏, အရေးကြီးပါသည်44.
Bing အစာစားခြင်းရောဂါ (တစ်ချိန်ကလပေါင်းများစွာတစ်ကာလအတွင်းတစ်ပတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဥပမာ) အစာစားမူးရူး၏မကြာခဏ, မှုများထပ်တလဲလဲဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲအစာစားခြင်းတစ်ဦးက Bing, တစ်ဦးချင်းစီစားထိန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုံးရှုံးမှုတွေ့ကြုံရသောကာလအတွင်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကွဲပြားကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသထက်ပိုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားခါတိုင်းထက်ကိုစားခြင်း, အစာစားခြင်းရပ်တန့်သို့မဟုတ်စွာစားအစားအစာအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ပမာဏကိုကန့်သတ်နိုင်ခြင်းခံစားရပါတယ်။
Bing စားအလွန်စိတ်ပျက်စရာအဖြစ်ကြုံတွေ့နှင့်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအပြစ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ရွံရှာအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကလိုက်ပါသွားသည်။ သို့သော် bulimia nervosa အတွက်မတူဘဲဖြစ်စဉ်များအစာစားမူးရူးမှန်မှန်ကိုယ်အလေးချိန် (ဥပမာ Self-သွေးဆောင်အန်, laxatives သို့မဟုတ် enemas ၏အလွဲသုံးစားမှုများ, စိတ်အားသန်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း) တားဆီးရည်ရွယ်မသင့်လျော်အစားထိုးအပြုအမူတွေအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်မဟုတ်။ မူးရူးစားရောဂါမကြာခဏကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ပေမယ့်အဲဒီအင်္ဂါရပ်တွေတစ်ဦးလိုအပ်ချက်နှင့်ရောဂါမဟုတ်ပုံမှန်အလေးချိန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ICD ‐ 11 တွင်မူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါဖြည့်စွက်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်း၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့်လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောကျယ်ပြန့်သောသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်45, 46။ ကမူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါ၏ပါဝင်မှုသည်ဤ diagnoses လျှော့ချလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြောင်းဒါမသင့်လျော်အစားထိုးအပြုအမူတွေမရှိဘဲမူးရူးစား၏ဖြစ်စဉ်များသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားသတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်မသတ်မှတ်ထားသောစားရောဂါ ICD-10 diagnoses လက်ခံရရှိသူတို့တွင်အများဆုံးအုပ်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြု47.
ကိုရှောင်ကြဉ် / တင်းကျပ်အစားအစာစားသုံးမှုရောဂါ
ကိုရှောင်ကြဉ် / တင်းကျပ်အစားအစာစားသုံးမှုရောဂါ (ARFID) လုံလောက်သောစွမ်းအင်သို့မဟုတ်အာဟာရလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အစားအစာတစ်ခုမလုံလောက်သောအရေအတွက်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုး၏စားသုံးမှုမှုကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောစားသို့မဟုတ်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်အတွက်မျှော်မှန်းထားသည်အဖြစ်အလေးချိန်ရဖို့ရန်ပျက်ကွက်, ဆေးခန်းသိသိသာသာအာဟာရချို့တဲ့, ပါးစပ်အာဟာရဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ပြွန်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပေါ်မှီခိုနေ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်အနုတ်လက္ခဏာသိသိသာသာ functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ရလဒ်များကိုများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများတွင်ရလဒ်များ။
ARFID သည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ပုံသဏ္aboutာန်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် anorexia nervosa နှင့်ခွဲခြားထားသည်။ ICD-11 တွင်ပါ ၀ င်မှုအား ICD-10 အမျိုးအစား“ နို့စို့အရွယ်နှင့်ကလေးဘဝအစာကျဆင်းခြင်းရောဂါ” ကိုတိုးချဲ့ခြင်းဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လက်တွေ့အသုံး ၀ င်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ARDID ICD counter10 နှင့်မတူဘဲ) ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ DSM ‐ ၅ နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်45, 47.
ခန္ဓာကိုယ်သမာဓိရှိ dysphoria ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စတင်တိကျတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်း (ဥပမာ, ဖြတ်တောက်ခြင်း, paraplegia, မျက်စိကွယ်, နားပင်း) ရှိသည်ဖို့ဇွဲအလိုဆန္ဒအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှားပါးရောဂါ48။ အဆိုပါဆန္ဒအပြုအမူ "ဟန်ဆောင်" ၌ပါဝငျ, အလိုရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျအပါအဝင်နည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများအတွက်ထင်ရှားနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ, တစ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အတွက်နာရီဖြုန်းသို့မဟုတ်ခြေထောက်ကိုသုံးပြီးခြေထောက်အားနည်းချက်ရှိခြင်းတူအောင်ဖန်တီးရန် braces), နှင့်အသုံးစရိတ်အချိန်ရှာဖွေနေ လိုချင်သောမသန်စွမ်းအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများ။
(ဟန်ဆောင်သုံးစွဲအချိန်အပါအဝင်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းရှိသည်ဖို့ဆန္ဒနှင့်အတူအဆက်မပြတ်သိသိသာသာကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများ, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့နှောင့်ယှက် (ဥပမာအဲဒါကိုခက်ခဲဟန်ဆောင်စေမည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတစ်ဦးအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်) ။ ထို့အပြင်ဤအလိုဆန္ဒနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏သိသာထင်ရှားသောလူနည်းစုများအတွက်၎င်းတို့၏အဆက်မပြတ်စိတ်ကူးယဉ်ထက်ကျော်လွန်သွား, သူတို့ (အနေနဲ့မဟုတ်ရင်ကျန်းမာခြေလက်များ၏ရွေးကောက်ပွဲဖြတ်တောက်ခြင်းများဝယ်ယူရန်အားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ) သို့မဟုတ် Self-မထိခိုက်စေတဲ့ကိုယ်လက်အင်္ဂါမှနေဖြင့်ခွဲစိတ်နည်းလမ်းများမှတဆင့်အလိုဆန္ဒ၏အမှန်တကယ်ကိုလိုက် ဖြတ်တောက်ခြင်း (ခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲထဲမှာခြေလက်အေးခဲနေသောဥပမာ) ကိုသာကုထုံး option ကိုဖြစ်သည့်အတွက်ဒီဂရီ။
အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုအလွန်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လူကြိုက်များအတွက်မြင့်တက်လာခဲ့သည်နှင့်အမျှပြဿနာများဂိမ်းထဲမှာအလွန်အကျွံပါဝင်ပတ်သက်မှုမှဆက်စပ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဂိမ်းရောဂါပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းပုံစံကိုတုန့်ပြန် (စလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါပါရှိသည်) ကိုအသစ်ထည့်သွင်းအဖြေရှာတဲ့အာဆီယံခေါ် "စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်" တွင်ထည့်သွင်းထားသည်49.
ဂိမ်းရောဂါအပြုအမူကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်ထင်ရှားကြောင်းမြဲသို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲအင်တာနက်အခြေပြုသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအမူအကျင့်တစ်ခုပုံစံ ( "ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းကစားခြင်း" သို့မဟုတ် "ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား") (ဥပမာသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုကန့်သတ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် အခြားဘဝအကျိုးစီးပွားများနှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများထက် ကျော်လွန်. ကြာသောအတိုင်းအတာအထိဂိမ်းကစားနိုင်ရန်တိုးမြှင့်ကိုဦးစားပေးခြင်းဂိမ်း), နှင့် (ထပ်တလဲလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိမ်းကစားခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံပျက်ကွက်၏အလုပ်အကိုင်များကနေပစ်ခတ်ခံရဥပမာ) က၎င်း၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းဂိမ်းဆက်လက်သို့မဟုတ်မြင့်တက်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်လည်ပတ်အတွက်ဆေးခန်းကိုသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းသဖြင့် Non-ရောဂါဗေဒဂိမ်းကစားခြင်းအမူအကျင့်ကနေမတူညီဖြစ်ပါတယ်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါအသည်းအသန်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရာကာလသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား precipitating မှအချိုးအစားထဲကကလုံးဝဖြစ်ခြင်း၏ပေါကျကှဲခွငျးသို့မဟုတျဒီဂရီများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူရန်လို Impulses သတင်းပို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ကိုယ်စားပြုကြောင်းအိမ်ခြံမြေ၏နှုတ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲအကျဉ်းဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များသည်အခြားအခြေအနေများ (ဥပမာအတိုက်အခံခိုင်မာသောစိတ်သဘောရောဂါ, အကငျြ့ရောဂါ, စိတ်ကြွရောဂါ) အမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကြောင့်ဖြစ်စဉ်များပိုကောင်းအခြား, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ် neurodevelopmental ရောဂါအားဖြင့်ရှင်းပြထားသည်လျှင်, ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမပေးသောဖြစ်ပါတယ်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါကို DSM-III ကို-R ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်း, ကသာ "အခြားအလေ့အထနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မမှန်" တစ်ခုအောက်တွင်ပါဝင်သက်တမ်းအဖြစ် ICD-10 အတွက်ထင်ရှား။ , ဒါဟာလက်တွေ့ setting တွင်၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့် utility ကို၏ကြီးမားသောသက်သေအထောက်အထားများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် ICD-11 ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်သည်51.
Premenstrual dysphoric ရောဂါ
Premenstrual dysphoric ရောဂါ (PMDD) ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်, somatic သို့မဟုတ် menses စတင်ခြင်းမပြုမီရက်ပေါင်းများစွာကိုစတင်ကြောင်းသိမြင်မှုရောဂါလက္ခဏာအမျိုးမျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်စတင်နှင့်စတင်ခြင်းအောက်ပါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အတွင်းအနည်းဆုံးသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ဖြစ်လာ menses ။
ပိုများသောအထူးသ, ထိုရောဂါအတိတ်အတွင်းရာသီသံသရာတစ်အများစုစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီစိတ်ဓါတ်များလက္ခဏာတွေတစ်ပုံစံ (စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်, စိတ်တိုတာတွေ), somatic လက္ခဏာတွေ (lethargy, ပူးတွဲနာကျင်မှု, ကျော်), ဒါမှမဟုတ်သိမြင်မှုရောဂါလက္ခဏာများ (အာရုံစူးစိုက်မှုအခက်အခဲများ, မေ့လျော့) လိုအပ်ပါတယ် တစ်နှစ်။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာများပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစု, လူမှုရေး, ပညာရေး, လုပ်ငန်းခွင်များသို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောဒေသများရှိသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းစေရန်လုံလောက်သောပြင်းထန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ exacerbation ကိုယ်စားပြုကြပါဘူး။
ICD ‐ 11 တွင် PMDD သည်ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်သိသိသာသာစိတ်သောကရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေသောလိုအပ်ချက်တို့ဖြင့် PMDD ကို ပိုမို၍ ပိုမိုများပြားသော premenstrual တင်းမာမှုလက္ခဏာနှင့်ခွဲခြားထားသည်။52။ အဆိုပါ DSM-III ကို-R နှင့် DSM-IV ရဲ့သုတေသနနောက်ဆက်တွဲအတွက် PMDD ၏ပါဝင်မှုသည်၎င်း၏သက်တမ်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရထူထောင်ထားပြီးသုတေသနမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်နှိုးဆွပေး52, 53အဆိုပါ ICD-11 နှင့် DSM-5 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှဦးဆောင်။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက်၎င်း၏အဓိကတည်နေရာ genitourinary စနစ်၏ရောဂါများအပေါ်အခနျးမှာဖြစ်သော်လည်း PMDD စိတ်ဓါတ်များ symptomatology ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြောင့်စိတ်ကျရောဂါမမှန်များ၏လူမျိုးခွဲများအတွက် Cross-စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ICD-11 disorders Group ကပြောင်းလဲမှုများ SUMMARY
အောက်ပါကဏ္ဍများကိုယခင်ပုဒ်မမှာဖော်ပြထားတဲ့သစ်ကိုအမျိုးအစားအပြင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်ပေါ်တွင် ICD-11 မျြးအခနျးကွီး၏အဓိကရောဂါ Group ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်မိတ်ဆက်ပြောင်းလဲမှုများအနှစ်ချုပ်။
ဤအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသိပ္ပံနည်းကျ ICD-11 အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအတိုင်ပင်ခံများကသက်သေအထောက်အထား, လက်တွေ့ utility ကိုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှောက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်, ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်လယ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏ရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်၏အခြေခံပေါ်မှာကြပြီ။
Neurodevelopmental မမှန်သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းစတင်ခြင်းနှင့်အတူသီးခြားပညာတတ်, မော်တာ, ဘာသာစကားသို့မဟုတ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများဝယ်ယူခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခက်အခဲများပါဝင်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ICD-11 neurodevelopmental မမှန်အာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) ၏ထို့အပြင်အတူဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မမှန်၏ ICD-10 အုပ်စုပတ်ဝိုင်း။
အဆိုပါ ICD-11 အတွက်ဗိုလ်မှူးအပြောင်းအလဲများကိုလုံလောက်စွာဒီအခွအေနေနဲ့ဆက်စပ်ပုံစံများနှင့် etiologies ၏အကွာအဝေးကိုဖမ်းယူမပြုခဲ့ကြောင်းတစ်ခုပေါရာဏနှင့်သားကောင်သက်တမ်းခဲ့သည့် ICD-10 ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကနေဉာဏဖွံ့ဖြိုးရေးမမှန်များ၏အမည်ပြေင်းပါဝင်သည်54။ ဉာဏဖွံ့ဖြိုးရေး disorders ထွက်ရှိသောစံချိန်စံညွှန်းမီ, တစ်ဦးချင်းဆီလျြောစှာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အုပ်ချုပ်အစီအမံကဆုံးဖြတ်ဉာဏလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်သပ္ပါယ်အပြုအမူအတွက်သိသာထင်ရှားသောန့်အသတ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာသတ်မှတ်ခံရဖို့ဆက်လက်။ ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာ၌သူတို့ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ဒေသအလိုက်သင့်လျော်သောစံချိန်စံညွှန်းမီအစီအမံသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပုဂ္ဂိုလ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိခြင်း၏အသိအမှတ်ပြုမှု၌၎င်း, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းများအတွက်ပြင်းထန်မှုအဆုံးအဖြတ်၏အရေးပါမှု၏, ထို ICD-11 CDDG ကိုလည်းအမူအကျင့်ညွှန်ပြချက်၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုကိုပေး စားပွဲ55.
ပညာတတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် domains များ (အယူအဆရေးရာလူမှုရေး, လက်တွေ့ကျတဲ့) functioning သပ္ပါယ်အပြုအမူများအတွက်သီးခြားစားပွဲသုံးခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများ (အစောပိုင်းကလေးဘဝ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ / မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီး) နှင့်ပြင်းထန်မှုလေးအဆင့်ဆင့် (ပျော့အလယ်အလတ်, ပြင်းထန်, လေးနက်) အရဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အမူအကျင့်ညွှန်းကိန်းပုံမှန်အားဖြင့်ဤသူအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုအတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြင်းထန်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်စေရန်နှင့်အသိပညာဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုံမမှန်များ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့်ဆက်စပ်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေး data တွေကိုတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ထားလျက်ရှိသောသူတို့ကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြရန်။
ICD-11 တွင် Autism ရောင်စဉ်တန်းရောဂါသည်ကလေးသူငယ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့် ICD-10 မှ Asperger's syndrome ရောဂါနှစ်ခုလုံးကိုအမျိုးအစားအလိုက်လူမှုဆက်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှုများနှင့်အပြုအမူ၊ အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ကန့်သတ်ထားသော၊ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုသက်တမ်းတစ်လျှောက်တင်ပြချက်များအပါအ ၀ င်လက်ရှိစာပေများကိုထင်ဟပ်စေရန်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ဉာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောဘာသာစကားစွမ်းရည်များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖော်ပြရန် autism spectrum disorder ၏တင်ပြမှုအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြရန်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောသူများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ADHD ICD-10 hyperkinetic မမှန်အစားထိုးထားပါတယ်ကြောင့်ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးစတင်ခြင်း, ဉာဏ, မော်တာနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ဝိသေသနှောင့်အယှက်များနှင့်အခြား neurodevelopmental မမှန်နှင့်အတူဘုံ Co-ဖြစ်ပျက်မှု၏ neurodevelopmental မမှန်များ၏အုပ်စုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒီအပြောင်းအရွေ့လည်း ADHD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပုံမှန်အားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှောင့်အယှက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပေးထားပိုမိုနီးကပ်စွာနှောင့်အယှက်အပြုအမူနှင့် dissocial မမှန်နှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ် ADHD ကြည့်ရှု၏အယူအဆရေးရာအားနည်းခြင်းအမှာစကားပြောကြား။
ADHD အများစုကြီးစိုး hyperactive-ထကြွလွယ်သော, inattentive, ဒါမှမဟုတ်စုစုပေါင်းအမျိုးအစားများအတွက်ခြေစစ်ပွဲသုံးပြီး ICD-11 အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်, နှင့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ဖော်ပြထားသည်။
နောက်ဆုံးတော့ (ADHD နှင့်အတူ, ဥပမာ) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့၏မြင့် Co-ဖြစ်ပျက်မှု၏, Tourette syndrome ရောဂါအပါအဝင်နာတာရှည်နေကြပါပြီမမှန်, အာရုံကြောစနစ်၏ရောဂါများအပေါ် ICD-11 ခနျးမှာခွဲခြားနေကြတယ်, ဒါပေမယ့် neurodevelopmental မမှန်များ၏အာဆီယံအတွက် Cross-စာရင်းနှင့် အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းပုံမှန်စတင်ခြင်း။
schizophrenia နှင့်အခြားမူလတန်း psychotic မမှန်များ၏ ICD-11 အာဆီယံ schizophrenia, schizotypal နှင့်လှညျ့မမှန်များ၏ ICD-10 အာဆီယံအစားထိုးထားသည်။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "မူလတန်း" psychopathology (ဥပမာစိတ်ဓါတ်များမမှန်) ၏အခြားပုံစံများတစ်ခုရှုထောင့်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါ psychotic ရောဂါလက္ခဏာတွေမှမတူဘဲ, psychotic ဖြစ်စဉ်များအဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာကွောငျးဖျောပွသ18.
Schneiderian ဦးပထမဦးဆုံးရာထူးလက္ခဏာတွေ၏အရေးပါမှုကိုဖယ်ရှား-အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့ပြီးသော်လည်း ICD-11 ခုနှစ်, schizophrenia လက္ခဏာတွေအကြီးအကျယ်သည် ICD-10 ကနေမပြောင်းလဲရှိနေဆဲပါပြီ။ အထင်ရှားဆုံးပြောင်းလဲမှုကုသမှုရွေးချယ်ရေးအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုသို့မဟုတ် utility ကိုသူတို့ရဲ့မရှိခြင်းကြောင့် schizophrenia များ၏အားလုံး Subtype ၏ဖျက်သိမ်းရေး (ဥပမာ, အကြောက်လွန်ရောဂါ hebephrenic, catatonic) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမျိုးကွဲများ၏အစား, ရှုထောင် descriptor များကိုအစုတခုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး18။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်: အပြုသဘောလက္ခဏာတွေ (ဘေးဥပဒ်, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, စနစ်တကျစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့အပြုအမူတွေမှာ Passive နှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏အတွေ့အကြုံများကို); (ကျပ်တုံးသို့မဟုတ်ပြားထိခိုက်စေ, alogia သို့မဟုတ်မိန့်ခွန်း, avolition, anhedonia ၏နည်းပါး) အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေ; စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များလက္ခဏာတွေ; Manic စိတ်ဓါတ်များလက္ခဏာတွေ; psychomotor လက္ခဏာတွေ (psychomotor လှုံ့ဆော်မှု, psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီ, catatonic လက္ခဏာတွေ); နှင့်သိမြင်မှုရောဂါလက္ခဏာများ (အပြောင်းအလဲနဲ့, အာရုံစူးစိုက်မှု / အာရုံစူးစိုက်မှု, တိမ်းညွတ်, တရားသဖြင့်စီရင်, abstraction, နှုတ်သို့မဟုတ်အမြင်အာရုံသင်ယူမှုနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏မြန်နှုန်းအတွက်အထူးသဖြင့်လိုငွေပြမှု) ။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်လက္ခဏာ ratings ကိုလည်း Group (schizoaffective ရောဂါစူးရှခြင်းနှင့်ယာယီ psychotic ရောဂါ, လှညျ့ရောဂါ) ရှိအခြားအမျိုးအစားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ICD-11 schizoaffective ရောဂါနေဆဲ schizophrenia syndrome ရောဂါနှင့်တစ်ဦးခံစားချက်ဇာတ်လမ်းတွဲနှစ်ဦးစလုံး၏အနီးတစ်ပြိုင်နက်ရှိနေခြင်းလိုအပ်သည်။ အဆိုပါရောဂါနာမကျန်း၏လက်ရှိဇာတ်လမ်းတွဲရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်နှင့် longitudinal တည်ငြိမ်အဖြစ် conceptualized မပေးပါ။
ICD-11 စူးရှခြင်းနှင့်ယာယီ psychotic ရောဂါအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းသဘာဝနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်လျှင်မြန်စွာအတက်အကျနှင့်သုံးလထက်မပိုရှည်ဆက်လက်ရှိကြောင်းအပြုသဘောဆောင် psychotic လက္ခဏာတွေရုတ်တရက်စတင်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသာအသုံးအများဆုံးတင်ဆက်မှုနှင့် schizophrenia များ၏ညွှန်ပြမဟုတျကွောငျးတစျခုသော ICD-10 အတွက်စူးရှ psychotic ရောဂါ၏ "polymorphic" ပုံစံကိုမှကိုက်ညီ56, 57။ အဆိုပါ ICD-10 အတွက်စူးရှ psychotic ရောဂါ non-polymorphic Subtype ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အစား "အခြားမူလတန်း psychotic ရောဂါ" အဖြစ် ICD-11 အတွက်ခွဲခြားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ICD-10 ၌ရှိသကဲ့သို့, schizotypal ရောဂါကဒီအုပ်စုထဲမှာခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါ ICD-10 အတွက်မတူဘဲ, ICD-11 စိတ်ဓါတ်များဖြစ်စဉ်များလွတ်လပ်စွာ diagnosable အခြေအနေများမဟုတ်မဟုတ်ဘဲအချိန်ကျော်သူတို့ရဲ့ပုံစံအကောင်းဆုံးလက်တွေ့တင်ဆက်မှုကိုက်ညီသည့်စိတ်ဓါတ်များရောဂါအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ခံစားချက်မမှန် (စိတ်ကြွ type ကိုငါရောဂါ, စိတ်ကြွအမျိုးအစား II ကိုရောဂါနှင့် cyclothymia ပါဝင်သည်ရာ) နှင့်စိတ်ကြွရောဂါ (single ဇာတ်လမ်းတွဲစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, မှုများထပ်တလဲလဲစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, dysthymic ရောဂါနှင့်ရောထွေးစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါတို့ပါဝင်သည်) ကိုစိတ်ကျရောဂါမမှန်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ICD-11 စိတ်ကြွ type ကိုငါနှင့်အမျိုးအစား II ကိုမမှန်သို့ ICD-10 စိတ်ကြွကိုထိခိုက်ရောဂါ subdivides ။ dysthymia နှင့် cyclothymia ပါဝင်သည်ဟုမြဲစိတ်အခြေအနေမမှန်များ၏သီးခြား ICD-10 လူမျိုးကွဲ, ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး58.
စိတ်ကျရောဂါဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက်အဖြေရှာတဲ့လမ်းညွှန်ချက်အနည်းငယ်သာလက္ခဏာရေတွက်လိုအပ်ပါသည်ရှိရာ ICD-11 အတွက်အနည်းငယ်သောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကာလကြာရှည်သုတေသနနှင့်ဤထုံးစံ၌စိတ်ကျရောဂါ conceptualizing ၏လက်တွေ့အစဉ်အလာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါးဆယျယောကျ၏ရောဂါလက္ခဏာများ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်ထက်ကိုးဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေလေးပါးအရှင် DSM-10 နှင့်အတူကိုက်ညီမှုတိုးမြှင့်, ICD-5 အတွက်သတ်မှတ်သောဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ symptomatology အပြည့်အဝရောင်စဉ် conceptualizing နှင့်ပြန်ခေါ်အတွက် Clinician အထောက်အကူပြုဖို့ - ကိုထိခိုက်သိမြင်မှုနှင့်အ neurovegetative - အ ICD-11 CDDG သုံးပြွတ်သို့စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေစုစည်း။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့် neurovegetative လက္ခဏာစပျစ်သီးပြွတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်မရှိတော့ entry-level လက္ခဏာအဖြစ်လုံလောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိ၏ အစား, ဖြစ်စေနီးပါးနေ့စဉ်စိတ်ဓာတ်ခံစားချက်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်တည်တံ့လှုပ်ရှားမှုများတွင်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားလိုအပ်ပါသည်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကျရောဂါမမှန်၏ diagnoses ၎င်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုးခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအပိုဆောင်းသိမြင်မှုလက္ခဏာအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်59။ အဆိုပါ ICD-11 CDDG ဝမ်းနည်းပူဆွေး၏ဆက်စပ်အတွက်စိတ်ကျရောဂါဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခိုင်လုံကြောင်းယဉ်ကျေးမှုစံတန်ဖိုးဝမ်းနည်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းညွှန်မှုပေး60.
Manic ဖြစ်စဉ်များအဘို့, ICD-11 Euphoria ပီတိ, စိတ်တိုတာတွေသို့မဟုတ်ချဲ့ထွင်အပြင်, တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်စွမ်းအင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံ entry ကိုအဆငျ့လက္ခဏာ၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်သည်။ ဒါကခံစားချက်အတွက်စံတန်ဖိုးအတက်အကျအဖြစ်ပိုကောင်းစရိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်အံ့သောငှါမမှန်သောအပြုသဘောအမှုပေါင်းဆန့်ကျင်စောငျ့ရှောကျဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ICD-11 hypomanic ဖြစ်စဉ်များသိသိသာသာ functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်း၏မရှိခြင်းအတွက် Manic ဖြစ်စဉ်များတစ်ခု attenuation ပုံစံအဖြစ် conceptualized နေကြသည်။
ရောနှောထားသောဖြစ်စဉ်များကိုဤချဉ်းကပ်မှု၏တရားဝင်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီး, ထို ICD-11 မှသဘောတရားနှင့်ညီမျှကြောင်းတစ်လမ်းအတွက် ICD-10 အတွက်သတ်မှတ်ကြပါတယ်61။ လမ်းညွှန်မှု Manic သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စေရောဂါလက္ခဏာကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်တဲ့အခါမှာလေ့လာတွေ့ရှိပုံမှန် contrapolar လက္ခဏာတွေနှင့် ပတ်သက်. ပေးအပ်သည်။ တစ်ဦးရောနှောဇာတ်လမ်းတွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်စိတ်ကြွ type ကိုငါရောဂါဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ ICD-11 လက်ရှိခံစားချက်ဇာတ်လမ်းတွဲသို့မဟုတ်လွှတ် status ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်အပြည့်အဝလွှတ်အတွက်) ကိုဖော်ပြရန်အမျိုးမျိုးသောခြေစစ်ပွဲပေးပါသည်။ စိတ်ကျရောဂါ, Manic နှင့်ရောထွေးဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူသို့မဟုတ် psychotic လက္ခဏာတွေမပါဘဲအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါများ၏အခြေအနေတွင်လက်ရှိစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များထပ်မံပြင်းထန်မှု (ပျော့အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သော) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်; ICD-10 အတွက် somatic syndrome ရောဂါ၏အယူအဆနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြင့်သမုတ်သောတစ်ဦးလွမ်းဆွေး features တွေခြေစစ်ပွဲအားဖွငျ့၎င်းငျး, ကျော်နှစ်နှစ် '' ကြာချိန်၏ persistent ဖြစ်စဉ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ခြေစစ်ပွဲဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးစိတ်ဓါတ်များစိတ်ကျရောဂါ၏အခြေအနေတွင်ဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါနောက်ထပ်တစ်ထင်ရှားတဲ့စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေခြေစစ်ပွဲကို အသုံးပြု. ဖျောပွနိုငျ; ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြနေတဲ့ခြေစစ်ပွဲ; နှင့်ရာသီအလိုက်ပုံစံကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ခြေစစ်ပွဲ။ လျင်မြန်သောစက်ဘီးစီးခြင်းအဘို့အဦးခြေစစ်ပွဲတွင်လည်းစိတ်ကြွရောဂါ diagnoses များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ICD-11 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု setting တွင်၎င်း၏အရေးပါမှုရောထွေးစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏အမျိုးအစားလည်းပါဝင်သည်62, 63။ ဤကဏ္ဍတွင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခံစားချက် symptomatology နှင့်အတူ၎င်း၏ထပ်အထောက်အထားများ၏ ICD-10 အတွက်မမှန် depressive ဖို့ ICD-11 အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ကနေပြောင်းရွေ့ထားပြီး64.
အဆိုပါ ICD-11 ဒီအုပ်စုအသစ်အတွက်မူလတန်းလက်တွေ့အင်္ဂါရပ်အဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မမှန်အတူတကွဆောင်တတ်၏65။ ICD-11 ရဲ့သက်တမ်းချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ဒီအုပ်စုကိုလည်း ICD-10 အတွက်ကလေးဘဝမမှန်တို့တွင်နေရာချခဲ့ပြီးသောခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်ရွေးချယ် mutism, ပါဝင်သည်။ phobic စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်အကြား ICD-10 ဂုဏ်ထူးကို စိုးရိမ်. ၎င်း၏အာရုံအညီတစ်ဦးချင်းစီစိုးရိမ်စိတ် characterizing ပိုဆေးခန်းအသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကွောကျမကျဆက်စပ်ရောဂါ၏မျက်နှာသာအတွက် ICD-11 အတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး66; အကြောင်း, သူသို့မဟုတ်သူမ၏စိုးရိမ်စိတ်, အလွန်အကျွံဇီဝကမ္မ arousal နှင့် maladaptive အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုထွက်လာပါတယ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ (ထွေအုပ်) ယေဘုယျစိုးရိမ်သဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသို့မဟုတ်မဆိုအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှကန့်သတ်မထားဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
၏ ICD-11 များတွင်ထွေအုပ်တစ်ဦးထက်ပိုသည်၎င်း၏ထူးခြားသော phenomenology ၏နားလည်မှုတိုးတက်လာထင်ဟပ်မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များကိုသတ်မှတ်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားသည် အထူးသဖြင့်, စိုးရိမ်ပူပန်အဆိုပါရောဂါ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်အဖြစ်ယေဘုယျတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ICD-10 ဆန့်ကျင်ခြင်း, ICD-11 CDDG ထွေအုပ်အဖြစ်တာရှည်ရောဂါလက္ခဏာတွေစိတ်ဓါတ်များဖြစ်စဉ်များ၏ပစ္စုပ္ပန်လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြသည်အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါမမှန်နှင့်အတူပူးတွဲပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်။ အလားတူပင်အခြား ICD-10 hierarchical ဖယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (ဥပမာ, ထွေအုပ် phobic စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ် obsessive-compulsive ရောဂါအတူရောဂါမရနိုငျသညျ) ကိုလည်းကြောင့် ICD-11 နှင့်သက်သေအထောက်အထားအတွက်ရောဂါ phenomenology ၏ပိုကောင်း delineation ရန်, ဖျက်သိမ်းနေကြသူတွေကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြောင့် သီးခြားသတ်သတ်မှတ်မှတ်လက်တွေ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်အခြေအနေများ၏ detection နဲ့ကုသမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်။
ICD ‐ 11 တွင် agoraphobia သည်အလွန်ခက်ခဲသော (သို့) မရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပေါ်သောသို့မဟုတ်များစွာသောအခြေအနေများတွင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အဓိကအချက်မှာ ICD-10 ရှိပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနေရာများနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ထွက်ပြေးသွားသည့်လူအုပ်စုများကဲ့သို့သောအခြေအနေများနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပျခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်။
ထိတ်လန့်ရောဂါအထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အခြေအနေများမှကန့်သတ်မထားမှုများထပ်တလဲလဲမျှော်လင့်မထားတဲ့ထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုအားဖြင့် ICD-11 အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ICD-11 CDDG ပေးထားသောရောဂါ (လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတွက်ဥပမာအများပြည်သူစကားပြော) အတွက်ကိုကွောကျရှံ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်မျှော်လင့်တုံ့ပြန်လုံးဝပေါ်ပေါက်ရာထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုထိတ်လန့်ရောဂါတစ်ခုထပ်တိုးရောဂါခိုင်လုံမညွှန်ပြ။ အစား,a"ကိုထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူ" ခြေစစ်ပွဲအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါရောဂါမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ "ထိတ်လန်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အတူ" ခြေစစ်ပွဲကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန် (ကစိတ်ကျရောဂါဇာတ်လမ်းတွဲကာလအတွင်းအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဥပမာ) အင်္ဂါရပ် defining မဟုတ်သော်လည်းတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့သည်အဘယ်မှာရှိသည်အခြားမမှန်များ၏အခြေအနေတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အခြားသူများအနုတ်လက္ခဏာအကဲဖြတ်ကိုကြောက်ရွံ့၏အခြေခံပေါ်မှာသတ်မှတ် ICD-11 လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ, ICD-10 လူမှုရေး phobias အစားထိုးထားသည်။
အဆိုပါ ICD-11 CDDG အထူးသကအများဆုံးတစ်ဦးရင်ခုန်စရာဖက်သို့မဟုတ်ကလေးတစ်ဦးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်အဘယ်မှာရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, ကိုဖော်ပြရန်။
အဆိုပါ ICD-11 အတွက်အုပ်စုဖွဲ့အဆိုပါ OCRD များ၏နိဒါန်းဟာ ICD-10 ကနေသိသိသာသာထွက်ခွာကိုယ်စားပြုတယ်။ ဖြစ်စဉ်ထပ်တူရှိနေသော်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်-related မမှန်ကနေကွဲပြားအုပ်စုဖွဲ့ကာ OCRD အတွက်အဆိုပါကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, မလိုချင်တဲ့အတှေးအများနှင့်မူလတန်းလက်တွေ့အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ဆက်စပ်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေ၏ shared လက္ခဏာတွေနဲ့အတူမမှန် collating ၏လက်တွေ့ utility ကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီ Group ၏အဖြေရှာတဲ့ကွက်တိဝင်ပုံရိပ်ကနေထည့်သွင်းမမှန်တို့တွင် shared သက်တမ်းရှိ၏ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထား, မျိုးဗီဇနှင့် neurochemical လေ့လာမှုများမှလာ35.
ICD-11 OCRD obsessive-compulsive ရောဂါ, ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, olfactory ရည်ညွှန်းရောဂါ, hypochondriasis (နာမကျန်းစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ) နှင့်သိုလှောင်ရောဂါပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ICD-10 အတွက်တည်ရှိကြောင်းနှင့်ညီမျှအမျိုးအစားမတူညီသောအုပ်စုတွင်တည်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင် OCRD တွင်ပါဝင်သောအခြား OCRDs ၏သိမြင်မှုရှုထောင့်စရာမလိုဘဲထပ်တလဲလဲအပြုအမူ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ဝေမျှနှစ်ဦးစလုံး, trichotillomania (ဆံပင်ဆွဲရောဂါ) နှင့် excoriation (အသားအရေ-Pick) ရောဂါပါဝင်သောခန္ဓာကိုယ်-အာရုံစူးစိုက်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူမမှန်တစ်လူမျိုးကွဲဖြစ်ပါတယ်။ Tourette syndrome ရောဂါ, ICD-11 အတွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ရောဂါကြောင့် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူ၎င်း၏မကြာခဏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုများ၏ OCRD အာဆီယံအတွက် Cross-စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ICD-11 သို့သော်အချို့အရေးကြီးသောတည်းဖြတ်မူများကိုအတူအကြောင်း, မြဲ obsessive နှင့် / သို့မဟုတ် compulsive ဖြစ်ပါသည်, ICD-10 obsessive-compulsive ရောဂါ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါ ICD-11 မလိုချင်တဲ့ပုံရိပ်တွေထည့်သွင်းရန်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုကျော်လွန်ပြီး obsessive များ၏ concept ကိုခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးနှငျ့ / Impulses သတင်းပို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ထိုမှတပါး, compulsive များ၏ concept ကိုလျှို့ဝှက် (ဥပမာထပ်ခါတလဲလဲရေတွက်) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပေးခြင်းထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေကိုထည့်သွင်းရန်တိုးချဲ့ထားသည်။
စိုးရိမ်စိတ် obsessive နဲ့ဆက်စပ်အသုံးအများဆုံးကိုထိခိုက်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါ ICD-11 အတိအလင်းထိုကဲ့သို့သောရွံရှာ, အရှက်ကွဲခြင်း, "မပြည့်စုံ" ၏တစ်နည်း, ဒါမှမဟုတ်အရာ "ညာဘက်ကိုကွညျ့ရှု" သို့မဟုတ်မခံစားရဘူးကြောင်းကွာဟတဲ့အတွက်အဖြစ်လူနာအားဖြင့်အစီရင်ခံသည်အခြားဖြစ်ရပ်, ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူနာအများစု obsessive နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးသတင်းပို့သောကွောငျ့, သူတို့သည်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုကင်းမဲ့သောကွောငျ့ OCD ၏ ICD-10 Subtype, ဖျက်သိမ်းနေကြပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါမမှန်နှင့်အတူ obsessive-compulsive ရောဂါဖော်ထုတ်ဆန့်ကျင် ICD-10 တားမြစ်ချက်သည်ဤရောဂါ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ကွဲပြားကုသဘို့လိုအပ်ကြောင်း၏မြင့်မှုနှုန်းထင်ဟပ်သည် ICD-11 အတွက်ဖယ်ရှားသည်။
Hypochondriasis (ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ) ကနျြးမာရေးအတွက်အဆက်မပြတ်လေ့ရှိသောကွောငျ့ OCRD နှင့်အတူမိသားစုစုစည်းမှု၏ shared phenomenology နှင့်ပုံစံများ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်ကိုပင်သော်လည်း, OCRD အတွက်ထက်စိုးရိမ်စိတ်ကြောက်-related မမှန်တို့တွင်နေရာချနေသည်67။ သို့သော် hypochondriasis (ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ) အချို့သောဖြစ်စဉ်ထပ်တူ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်အုပ်စုဖွဲ့အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related မမှန်အတွက် Cross-စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, olfactory ရည်ညွှန်းရောဂါနှင့်သိုလှောင်ရောဂါကို OCRD အုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြကြောင်း ICD-11 အသစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
တစ်သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းရှိသည် OCRDs များတွင်ယုံကြည်ချက်သူတို့လှညျ့ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ် fixity နှင့်အတူကျင်းပနိုင်ပါသည်။ ဤအ fixed ယုံကြည်ချက်ဟာ OCRD ၏ phenomenology နှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီသည့်အခါအခြား psychotic လက္ခဏာတွေ၏မရှိခြင်းအတွက်, "ထိုးထွင်းသိမြင်ကျောင်းပျက်မှဆငျးရဲသားနှင့်အတူ" ဟုအဆိုပါခြေစစ်ပွဲကိုအသုံးပြုရပါမည်နှင့်လှညျ့ရောဂါ၏ရောဂါတာဝန်ပေးမရသင့်ပါတယ်။ ဤသည် OCRDs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားစိတ္တဘို့မသင့်လျော်ကုသမှုဆန့်ကျင်ကိုယ်ရံတော်ကိုကူညီရည်ရွယ်ပါသည်35.
အထူးသစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်စပ်ရောဂါ၏ ICD-11 အာဆီယံသည်ဤရောဂါဟာစိတ်ဖိစီးဖြစ်ရပ်မှထိတွေ့မှုများအတွက်လိုအပ်သော (သို့သော်လုံလောက်မဟုတ်) etiologic လိုအပ်ချက် share ကြောင်းအလေးပေးဖို့အဖြစ်ခွဲခြားရန်, ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုမမှန်ဖို့ ICD-10 တုံ့ပြန်မှုအစားထိုး ဖိအား (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါမမှန်) အားတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ပေါ်ထွန်းသောအမျိုးမျိုးသောသည်အခြားစိတ်ရောဂါကနေပုံမမှန်ပါဝင်သည်41။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်ကလေးဘဝ disinhibited ပူးတွဲမှုရောဂါ၏ ICD-10 တုံ့ပြန်ပူးတွဲမှုရောဂါဒီ ICD-11 ၏သက်တမ်းချဉ်းကပ်ရန်နှင့်ထိုအပုံမမှန်ဖို့မွေးရာပါတိကျတဲ့ပူးတွဲဖိုင်ကို-related ဖိအားများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်မရှိစေရန်အုပ်စုဖွဲ့ဖို့ reclassified နေကြသည်။ အဆိုပါ ICD-11 အဆိုပါ ICD-10 မညီမျှသောရှိသော ICD-10 အဖြစ်ရှုပ်ထွေး PTSD နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဝမ်းနည်းခြင်းရောဂါ၏နိဒါန်းမှအတော်ကြာအရေးကြီးသောအယူအဆရေးရာနောက်ဆုံးသတင်းများ, ပါဝင်သည်။
PTSD အားလုံးကိစ္စများတွင်လက်ရှိဖြစ်သင့်ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းစေရမည်ဟုသုံး features တွေသတ်မှတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်: Re-ကြုံနေရပစ္စုပ္ပန်အတွက်စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်; Re-ကြုံနေရထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိသတိပေးချက်များ၏တမင်ရှောင်ရှားခြင်း, နှင့်ကြီးထွားလက်ရှိခြိမ်းခြောက်မှုမြဲသဘောထားအမြင်။ ထိုကဒီမှာယခုအခါအတွက် re-ကြုံနေရသည့်မှတ်ဥာဏ်များအတွက်လိုအပ်ချက်, အစိတ်ဒဏ်ရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မရှုထောင့်များစွာပါဝင်မယ့်အစားရုံဖြစ်ရပ် ICD-10 အတွက် PTSD များအတွက်အနိမ့်အဖြေရှာတဲ့တံခါးခုံကိုဖြေရှင်းရန်မျှော်လင့်နေသည်သတိရ42.
အဆိုပါ ICD-11 အတွက်ရောဂါသိလိုက်ရတယ်နေစဉ်ဘဝဖိအားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်လက္ခဏာတွေချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့ပါဘူးလျှင် ICD-10 အတွက်ညှိနှိုင်းမှုရောဂါ, တစ်ဦးဘဝဖိအားသို့မဟုတ်ယင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်အတူအဆက်မပြတ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များအပေါ် အခြေခံ. သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် အခြားရောဂါ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်တော့ ICD-11 အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်, ဒါပေမယ့်အစားတစ်ခုအစွန်းရောက်ဖိအားပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ထို့ကွောငျ့, ဒါပေမယ့်မမှန်များ၏အာဆီယံအတွက် Cross-စာရင်းအတိအကျ differential ကိုရောဂါနှင့်အတူကူညီပေးဖို့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်နွယ် "ကနျြးမာန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်လွှမ်းမိုးအချက်များ" ပေါ် ICD-11 ခနျးမှာခွဲခြားထားပါသည်။
ICD-11 dissociative (ပြောင်းလဲခြင်း) မမှန်မှသတင်းထောက်အုပ်စုဖွဲ့အဆိုပါ ICD-10 dissociative မမှန်ပေမယ့်သိသိသာသာမကြာသေးမီပင်ကိုယ်မူလတွေ့ရှိချက်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့နဲ့လက်တွေ့ utility ကိုမြှင့်တင်ရန်, ပွနျလညျဖှဲ့စညျးနှင့်ရိုးရှင်းသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟူသောဝေါဟာရကို "ပြောင်းလဲခြင်း" ကိုရည်ညွှန်းအာဆီယံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်သည်68။ ICD-11 dissociative အာရုံကြောလက္ခဏာရောဂါလှုပ်ရှားမှုနှင့်အာရုံ၏ ICD-10 dissociative မမှန်နှင့်အတူသဘောတရားတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မြင်သာထင်သာအာရုံကြောလက္ခဏာ (ဥပမာ, အမြင်အာရုံနှောင့်အယှက်, Non-epileptic သိမ်းယူမှု၏အခြေခံပေါ်မှာသတ်မှတ်တဆယ်နှစ်လုံးကို Subtype နှင့်အတူတစ်ခုတည်းရောဂါအဖြစ်တင်ပြထားပါသည် စကားနှောင့်အယှက်, သွက်ချာပါဒသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း) ။ ICD-11 dissociative သတိမေ့ခြင်း dissociative ဖူဂူး, ICD-10 အတွက်သီးခြားရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားသောဖြစ်ရပ်ဆန်းပစ္စုပ္ပန်ရှိမရှိညွှန်ပြမယ့်ခြေစစ်ပွဲပါဝင်သည်။
ICD ‐ 11 သည် ICD possession ၁၀ အပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာရောဂါကို Trance Disorder နှင့်အပိုင် Trance Disorder ၏သီးခြားရောဂါများအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ အဆိုပါခွဲခြာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းအဓိပ္ပာယ်ဝိညာဉျ, ပါဝါ, ဘုရားသို့မဟုတ်အခြားဝိညာဉျရေးရာ entity ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှစွပ်စွဲပြင်ပ "ပိုင်ဆိုင်" ဝိသေသလက္ခဏာဖြင့်အစားထိုးသည်အပိုင် trance ရောဂါအတွက်ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုထင်ဟပ်။ ထို့အပြင် ပိုမို၍ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုလက်ခံသည့်အစွဲတွင်ပြသခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အစွဲဆိုင်ရာပုံမှန်အားဖြင့်သာမန်ရိုးရှင်းသောအပြုအမူငယ်များ၏ထပ်တလဲလဲလုပ်ခြင်းကိုပါ ၀ င်သည်။
ICD ‐ 11 dissociative ဝိသေသလက္ခဏာရောဂါ ICD multiple 10 မျိုးစုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်လက်တွေ့နှင့်သုတေသနအခင်းအကျင်းအတွက်လက်ရှိအသုံးပြု nomenclature နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်အမည်ပြောင်းထားသည်။ ICD-11 သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသောဝိသေသလက္ခဏာမမှန်မှုကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ ICD-10 မပြတ်သေးသော dissociative disorders ၏ထူးခြားမှုကို reflect လွှမ်းမိုးမှုမရှိသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြည်နယ်များသည်တစ် ဦး ချင်း၏သတိနှင့်လည်ပတ်မှုအားအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကိုထပ်တလဲလဲမယူသောတင်ပြချက်များဖြင့်ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ ICD-10 အတွက်အုပ်စုဖွဲ့အခြား neurotic မမှန်တည်ရှိသော Depersonalization နှင့် derealization ရောဂါသည်, ICD-11 အတွက်အုပ်စုဖွဲ့အဆိုပါ dissociative မမှန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်။
နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်း၏ ICD-11 အာဆီယံ ICD-10 မမှန်အစာစားခြင်းနှင့်ကလေးဘဝကိုပုံမမှန်နို့တိုက်ကျွေးမှု, အသက်တမ်းတစ်လျှောက်ကဤပုံမမှန်များ၏အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်အဖြစ်ကဤပုံမမှန်ကျယ်ပြန့်ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောသက်သေအထောက်အထားထင်ဟပ်ပေါင်းစပ်ပြီး အသက်အရွယ်မရွေးအကွာအဝေး45, 47.
အဆိုပါ ICD-11 ICD-10 "atypical" အမျိုးအစားဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်ရာမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားများ, ထည့်သွင်းဖို့ anorexia nervosa နှင့် bulimia nervosa ၏အဆင့်မြှင့် Conceptual ပေးပါသည်။ ဒါဟာအစပင်ကိုယ်မူလက၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့်လက်တွေ့ utility ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်နို့စို့အရွယ်နဲ့ကလေးဘဝ ICD-10 နို့တိုက်ကျွေးရောဂါအပေါ်သို့ချဲ့ထွင်ထားတဲ့ ARFID, အပေါ်အခြေခံပြီးမိတ်ဆက်သောရောဂါအစာစားမူးရူးသစ်အဖွဲ့အစည်းများ, ပါဝင်သည်။
ICD-11 မှ Anorexia nervosa သည်ကျယ်ပြန့်သော endocrine ရောဂါရှိနေခြင်းအတွက် ICD-10 လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သက်သေသာဓကများအရ၎င်းသည်ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသော်လည်း၊ အဆိုပါရောဂါ၏အင်္ဂါရပ် defining ။ ထို့အပြင် endocrine ရောဂါမပါဘဲဖြစ်ပွားမှု atypical anorexia diagnoses များအတွက်အကြီးအကျယ်တာဝန်ရှိသည်။ ICD ‐ ၁၁ တွင်ကိုယ်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်း ၁၇.၅ ကီလိုဂရမ်မှမီတာအထိမြင့်တက်သည်2 18 ကီလိုဂရမ် / မီတာရန်2ဒါပေမယ့်လမ်းညွှန်ချက်များခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းလုံလောက်စွာတစ်ဦးပိုမိုဆိုးရွားလာလက်တွေ့ရုပ်ပုံလွှာ (ထိုရောဂါ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များဆက်စပ်အတွက်ဥပမာမိုးရွာသွန်းမှုကိုယ်အလေးချိန်) ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်သည့်အတွက်အခြေအနေများလိုက်လျောညီထွေ။ Anorexia nervosa အစားအစာငြင်းဆန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆက်မပြတ်၏အသုံးအနှုနျးမြားအဘို့အယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်၏အပြည့်အဝရောင်စဉ်များအတွက်ခွင့်ပြုမှ, ICD-10 ၌ရှိသကဲ့သို့ "အဆီ phobia" မလိုအပ်ပါဘူး။
ခြေစစ်ပွဲအလွန်အမင်းနိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းပိုမိုအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပေးထား, သိရပါ status ကို၏ပြင်းထန်မှုရဲ့အနှစ်သာရကမှထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ပုံစံကိုဖော်ပြတစ်ဦးကခြေစစ်ပွဲ (ဆိုလိုသည်မှာ, ပုံစံကန့်သတ်, Bing-ရှင်းလင်းမှုပုံစံ) ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ ICD-11 အတွက် Bulimia nervosa နေသမျှကာလပတ်လုံး anorexia nervosa ဘို့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းဒါနိမ့်မဟုတ်သည်အတိုင်း, မခွဲခြားဘဲတစ်ဦးချင်းစီ၏လက်ရှိအလေးချိန်၏ရောဂါနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့အတွက်သက်သေအထောက်အထားကမထောက်ပံ့ဖြစ်ကြောင်းတိကျတဲ့အနည်းဆုံးမူးရူးလှိုင်းများ၏အစားထဲမှာ, ICD-11 ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လမ်းညွှန်မှုပေးပါသည်။ တစ်ဦးက bulimia nervosa ရောဂါ "ရည်ရွယ်ချက်" Bing မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်မသက်ဆိုင်ပမာဏ၏, တစ်ဦးချင်းစီကိုပိုစားသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားပုံမှန်ထက်နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲဖြင့်လိုက်ပါသွားစားသုံးခြင်းထိန်းချုပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ့ကြုံရသော "ပုဂ္ဂလဒိဋ္" Bing ၏အခြေခံပေါ်မှာရောဂါရနိုင် အစားအစာ၏အမှန်တကယ်ကိုစား။ ဤပြောင်းလဲမှုသတ်မှတ်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ရောဂါ diagnoses စားသုံးခြင်း၏နံပါတ်လျှော့ချရန်မျှော်လင့်နေသည်။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "Non-အော်ဂဲနစ်" enuresis နှင့် encopresis ပါဝင်သည်သော ICD-11 ဖျက်သိမ်းရေးမမှန်ကနေဖယ်ရှားသည်။ ဤရွေ့ကားမမှန်ပိုကောင်းအခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုများကအဘို့မှတ်ရနိုင်သောသူတို့ထံမှမတူညီနေကြသည်။
ICD ‐ ၁၁ ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံများမှ ၁၁ ခုသောရောဂါများသည်ခန္ဓာကိုယ်၏စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏သမာဓိရှိမှုဆိုင်ရာပြysနာနှစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ICD ‐ 11 ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုရောဂါ ICD ‐ 11 somatoform disorders နှင့်အစားထိုးခြင်းနှင့်လည်း ICD ‐ 10 neurasthenia ၏အယူအဆပါဝင်သည်။ ICD ‐ 10 hypochondriasis ပါဝင်သည်မဟုတ်ဘဲအစား OCRD အုပ်စုတွင်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
ကာယဒုက္ခဆင်းရဲရောဂါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲအဆက်အသွယ်အားဖြင့်ထင်ရှားစေခြင်းငှါအရာ, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ရောဂါလက္ခဏာဆီသို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အလွန်အကျွံအာရုံစိုက်မှုမှစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်69။ အဆိုပါရောဂါပြင်းထန်မှုတစ်ဦးစဉ်ဆက်အပေါ်တည်ဆဲအဖြစ် conceptualized နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးအညီ (ပျော့အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သော) အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးတာက, ကိုယ်ထင်ရှားဒုက္ခဆင်းရဲရောဂါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထိုကဲ့သို့သောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အလွန်အကျွံအတွေးများနှင့်အပြုအမူအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, ထက် ICD-10 somatoform မမှန်၌ရှိသကဲ့သို့ bothersome ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့ပျက်ကွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်၏အခြေခံပေါ်မှာ၏ရှေ့မှောက်တွင်အညီသတ်မှတ်ထားသည်။
ICD-11 ခန္ဓာကိုယ်သမာဓိရှိ dysphoria ဒီအုပ်စုသို့ထည့်သွင်းကြောင်းအသစ်မိတ်ဆက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်48.
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ ICD-11 အာဆီယံဆေးဝါးများနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထပ်တလဲလဲကြိုးများနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူတွေ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်အပါအဝင် psychoactive တ္ထုများအသုံးပြုခြင်း, ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းမမှန်လွှမ်းခြုံ။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ICD-11 မမှန်များ၏အဖွဲ့အစည်းကလက်တွေ့ syndrome ပစ္စည်းဥစ္စာအတန်းနှင့်အညီခွဲခြားထားပါသည်မထွက်ရ ICD-10 အတွက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်70။ သို့သော် ICD-11 အတွက်တ္ထုများစာရင်းကိုတ္ထုများ၏လက်ရှိရရှိနိုင်မှုနှင့်ခေတ်ပြိုင်အသုံးပြုမှုပုံစံများကိုထင်ဟပ်ဖို့တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာလူတန်းစားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်မူလတန်းလက်တွေ့ syndrome နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်: အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုတစ်ခုတည်းဇာတ်လမ်းတွဲသို့မဟုတ် ICD-10 အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးသနျ့ကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအန္တရာယ်ပုံစံ, နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို။ မှီခိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ပုံစံကိုမသိရသည့်အခါပစ္စည်းဥစ္စာမူးယစ်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုတ်ခွာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြန့်ဝေဘို့အကြောင်းပြချက်အဖြစ်လည်းကောင်းအတူတကွမူလတန်းလက်တွေ့ Syndrome နှင့်အတူသို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာရောဂါနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပုံမမှန်များ၏အလွန်မြင့်မားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောဂါဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပေးအာဆီယံရဲ့အကောင်းဆုံး, မျိုးစုံအခင်းအကျင်းအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များ၏ဖမ်းယူ enable တိကျမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်အစီရင်ခံထောကျပံ့များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုနှစ်ခုစလုံးအကြောင်းကြားရန်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားပြီး70။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို၏အန္တရာယ်ပုံစံ၏ diagnoses ပို. ပို. အထူးကြပ်မတ်ကြားဝင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုသော်လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု ICD-11 တစ်ခုတည်းဇာတ်လမ်းတွဲများ၏များအပြင်, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိခိုက်မှု၏တင်းမာမှုများ၏အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။
အဆိုပါ ICD-11 (ကြောင့်မူးယစ်နေစဉ်ကားမောင်းဖို့ဥပမာ) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (PTSD ၏ဥပမာ, ဖွံ့ဖြိုးရေးအောက်ပါတစ်ခုခုပါဝင်နိုင်ပါသည်သောအခြားလူများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပါဝင်မှုကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်များ၏အယူအဆချဲ့ထွင် တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှု) ။
အဆိုပါ ICD-11 သည်အခြားစိတ်ရောဂါရှိသူများဆင်တူပေမယ့် psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းဆေးပညာသိသိသာသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပြုအမူလက္ခဏာတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ syndrome အဖြစ်ဥစ္စာ-သွေးဆောင်စိတ်ရောဂါပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-သွေးဆောင်မမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာမူးယစ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုတ်ခွာဖို့ related ခံရနိုင်ပေမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေများ၏ပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်ကြာချိန်မူးယစ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောတ္ထုများကြောင့်ဆုတ်ခွာအဲဒီဝိသေသများ၏ပိုလျှံအတွက်သိသိသာသာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ICD-11 ကိုလည်းစိတ်ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်အစား "ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်လွှမ်းမိုးအချက်များ" အပေါ်အခနျးမှာတည်ရှိပြီးထားတဲ့အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အမျိုးအစား, ပါဝင်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပုံစံကျန်းမာရေးပညာရှင်များအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်အချက်ကိုခိုင်လုံသည့်အတိုင်းအတာအထိအသုံးပြုသူမှသို့မဟုတ်အခြားသူများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမပေးခြင်းထိခိုက်မှုသေးဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည့်အခါဤအအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု setting တွင်စောစောနှင့်အကျဉ်းကြားဝင်များအတွက်အခွင့်အလမ်းအချက်ပြဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (ICD-11 အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း) နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ, အသစ်မိတ်ဆက်ထားတဲ့: စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့် ICD-10 မမှန်နှစ်ခုအဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားပါဝင်သည်49။ ICD-10 ခုနှစ်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်အလေ့အထနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပိုမိုမြင့်မား Co-ဖြစ်ပျက်မှုအဖြစ် hedonic တန်ဖိုးနှင့်တိုးပွားလာအသုံးပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းဆုံးရှုံးမှုတိုးတက်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ပိုင်းတွင်ပျြောမှေ့စဖြစ်ခြင်း၏ဘုံအင်္ဂါရပ်များအပါအဝင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှုကြောင့်မမှန်အကြားအရေးကြီးသောဖြစ်စဉ်တူညီဖို့သို့သော်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုမှတ်။ ထိုမှတပါး, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်အကျိုးကိုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအာရုံကြောဆားကစ်အတွင်းအထူးသဖြင့် activation နှင့် neuroadaptation အလားတူ neurobiology ဝေမျှဖို့ပေါ်လာ71.
ICD-11 ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်ဖြစ်စေတစ်ဦးချင်းစီမှရေရှည်ထိခိုက်မှုရှိနေသော်လည်း, အားကြီးသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်မောင်းထုတ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရေတိုရေရှည်အတွက်လူတစ်ဦးမှအကြိုးကြောင်းတစ်ခုလုပ်ရပ်ဖျော်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ် အခြားသူများ။
ဤသည်အာဆီယံအလေ့အထနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မမှန်အောက်ရှိ ICD-10 အတွက်ခွဲခြားထားတဲ့ pyromania နှင့် kleptomania, ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ ICD-11 ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါမိတ်ဆက်နှင့် ICD-10 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအဖြစ်ဤအုပ်စု ICD-11 အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို reclassifies50, 72, 73.
နှောင့်အယှက်အပြုအမူနှင့် dissocial မမှန်များ၏ ICD-11 အာဆီယံ ICD-10 အကငျြ့ပုံမမှန်အစားထိုးထားသည်။ ပိုကောင်းအသစ်အသုံးအနှုန်းသည်ဤအုပ်စုတွင်ထည့်သွင်းနှစ်ခုအခြေအနေများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအပြုအမူတွေနဲ့ phenomenology ၏ပြင်းထန်မှုအပြည့်အဝအကွာအဝေးထင်ဟပ်: ဆန့်ကျင်ဘက်ခိုင်မာသောစိတ်သဘောရောဂါနှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်-dissocial ရောဂါ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက်မိတ်ဆက်အရေးပါသောအပြောင်းအလဲ ICD-10 ကလေးဘဝပုံမမှန်အဖြစ်သူတို့ကို construes သော်လည်းနှစ်ဦးစလုံးရောဂါ, အသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရောဂါရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ ICD-11 (၏အခြင်းဥပမာ) လက်တွေ့ utility ကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်နှောင့်အယှက်အပြုအမူ၏ Subtype နှင့် dissocial မမှန်လက္ခဏာကြောင့်ခြေစစ်ပွဲကိုမိတ်ဆက်။
ICD-11 ဆန့်ကျင်ဘက်ခိုင်မာသောစိတ်သဘောရောဂါက၎င်း၏ ICD-10 ညီမျှအမျိုးအစားမှသဘောတရားဆင်တူသည်။ သို့သျောလညျးကို "နာတာရှည်ဒေါသထွက်စေပြီးအမျက်ဒေါသနှင့်အတူ" ခြေစစ်ပွဲဖြစ်ပျက်, မြဲစိတ်တိုစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသနှင့်အတူရောဂါရှိသူများတင်ပြချက်များရဲ့အနှစ်သာရကမှထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤသည်တင်ပြချက်သိသိသာသာနောက်ဆက်တွဲစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒီတင်ပြချက်များ၏ ICD-11 စိတ်ကူးဆန့်ကျင်ဘက်ခိုင်မာသောစိတ်သဘောရောဂါပုံစံလက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ Concorde ဖြစ်ပြီးအသစ်တစ်ခုကိုရောဂါမိတ်ဆက်များ၏ DSM-5 ချဉ်းကပ်မှု, နှောင့်အယှက်စိတ်ဓါတ်များ dysregulation ရောဂါကနေ diverges အဖြစ်74-76.
ICD-11 ရောဂါ (လူမှုရေး, မရောမနှောနတေတျသော, မိသားစုအခြေအနေတွင်မှချုပ်ထားဆိုလိုသည်မှာ,) ICD-10 အတွက်ခွဲခြားသုံးခုကသီးခြားအကငျြ့ရောဂါ diagnoses ကျစ်လစ်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အဆိုပါ ICD-11 နှောင့်အယှက်အပြုအမူနှင့် dissocial မမှန်မကြာခဏပြဿနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသက်တူရွယ်တူငြင်းပယ်ခံရ, deviant သက်တူရွယ်တူအုပ်စုသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, မိဘစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်ရောဂါ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခြင်းအကြားဆေးခန်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဂုဏ်ထူးအစောပိုင်းကစတင်ခြင်းပိုပြီးပြင်းထန်ရောဂါဗေဒနှင့်ရောဂါ၏ဆင်းရဲတဲ့သင်တန်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအထောက်အထားအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးခြေစစ်ပွဲနှင့်အတူညွှန်ပြနိုင်ပါသည်။
ကန့်သတ် prosocial စိတ်ခံစားမှုကိုညွှန်ပြရန်အရည်အချင်းတစ်ခုအားနှောင့်ယှက်သောအပြုအမူနှင့် dissocial disorders နှစ်ခုစလုံးအားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အတိုက်အခံဆန့်ကျင်သောစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါရောဂါအခြေအနေတွင်ဤတင်ပြချက်သည် ပိုမို၍ တည်ငြိမ်ပြီးဆန့်ကျင်သောအပြုအမူပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အမူအကျင့်များ - လူမှုရေးဆိုင်ရာရောဂါများတွင်၎င်းသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပိုမိုပြင်းထန်သော၊ ရန်လို။ တည်ငြိမ်သောပုံစံဆီသို့ ဦး တည်သည့်သဘောထားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
တကျိပ်တိကျတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်များ၏ ICD-10 ခွဲခြားနှင့်အတူပြဿနာများသည်အခြားစိတ်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားကသူတို့ရဲ့ပျံ့နှံ့ဖို့သိသိသာသာ underdiagnosis ဆွေမျိုး, တိကျသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်၏နှစ်ခုသာ (စိတ်လှုပ်ရှားမှုမတည်မငြိမ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ, နယ်စပ်ဒေသအမျိုးအစားနှင့် dissocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ) ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်း လူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင် databases ကိုအတွက်မဆိုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့် co-ဖြစ်ပျက်မှုများ၏နှုန်းထားများအလွန်မြင့်မားသောကြောင်းကိုပြင်းထန်မမှန်နှင့်အတူပါဆုံးတစ်ဦးချင်းစီမျိုးစုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံအတူခဲ့ကြသည်16, 17.
တစ် ဦး ချင်းစီ၏တင်ပြချက်သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက်အထွေထွေရောဂါရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဦး စွာဆုံးဖြတ်ရန် ICD-11 CDDG ကဆရာ ၀ န်အားမေးမြန်းသည်။ ထို့နောက်ဆရာ ၀ န်သည်နုပျိုသော၊ အလယ်အလတ်အဆင့်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါစစ်ဆေးခြင်းသည်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်မှာ - (က) မိမိကိုယ်ကို၏ရှုထောင့်များ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်အနှောင့်အယှက်များ၏အတိုင်းအတာနှင့်ပျံ့နှံ့မှု (ဥပမာ - ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိမှု၊ တိကျမှန်ကန်မှု) မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ပုံ၊ မိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်မှုစွမ်းရည်)၊ (ခ) အခြားသူများ၏အမြင်များကိုနားလည်ခြင်း၊ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပconflictိပက္ခများကိုစီမံခြင်းစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတိုင်းအတာနှင့်ပျံ့နှံ့မှု၊ ဂ) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သိမြင်မှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသရုပ်သဏ္ofာန်များ၏ပျံ့နှံ့မှု၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်နာတာရှည်၊ ()) ဤပုံစံများသည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ထို့နောက်ထပ်မံဝိသေသ maladaptive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြခြင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ လက္ခဏာဒိုမိန်းငါးခုပါဝင်သည်: အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့သဘောထားကို); ငျးကှာ (အခြားသူများအနေဖြင့်လူမှုရေးနှင့်လူ့အသိုက်အ ၀ န်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်သဘောထား); ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်ခံစားချက်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုခြင်းနှင့်စာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်); disinhibition (ရေရှည်အကျိုးဆက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်တုန့်ပြန်ပြုမူဖို့သဘောထားကို); နှင့် anankastia (လူတစ် ဦး ၏တင်းကျပ်သောစုံလင်ခြင်းစံနှုန်းနှင့်အမှားအမှန်ကို၎င်း၊ ထိုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသူတို့၏အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု) ။ ထင်ရှားသောဖြစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့အဖြစ်ဤရို domains များအများအပြားရောဂါ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်တစ်ဦး optional ကိုခြေစစ်ပွဲ "နယ်စပ်ဒေသပုံစံ" ကိုပေးအပ်သည်။ ဤသည်ခြေစစ်ပွဲအတွက် ICD-10 ဖို့ ICD-11 ကနေအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းစောင့်ရှောက်မှု၏ဆက်လက်သေချာစေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်အချို့ psychotherapeutic ကုသတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီ၏မှတ်ပုံတင်လွယ်ကူချောမွေ့နေဖြင့်လက်တွေ့ utility ကိုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ အပိုဆောင်းသုတေသနကရို domains များအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကနေကွဲပြားကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ ICD-11 လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါစဉ်းစားသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲ "ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်လွှမ်းမိုးအချက်များ" အပေါ်အခနျးမှာလူ့ interaction ကသူနဲ့ဆက်စပ်ပြဿနာများ၏အုပ်စုဖွဲ့စာရင်းဝင်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအခက်အခဲ, များအတွက်အမျိုးအစားပါဝင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအခက်အခဲကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုကုသမှုသို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါပေမယ့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ၏ရောဂါခိုင်လုံမှပြင်းထန်မှု၏အဆင့်အထိမထကြဘူးကြောင်းသိသာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများကိုရည်ညွှန်းသည်။
paraphilic မမှန်များ၏ ICD-11 အာဆီယံသုတေသနနှင့်လက်တွေ့အခင်းအကျင်းများတွင်အသုံးပြုခေတ်ပြိုင်ဝေါဟာရများနှင့်ကိုက်ညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုပုံမမှန်များ၏ ICD-10 အုပ်စု, အစားထိုး။ paraphilic မမှန်ခြင်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်သူတို့ Non-ဖှအခြားသူတွေအပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်းလိင်စိတ်နိုးထပုံစံများပါဝင်ကြောင်း77.
ICD-11 paraphilic မမှန် exhibitionistic ရောဂါ, voyeuristic ရောဂါနှင့် pedophilic ရောဂါပါဝင်သည်။ အသစ်မိတ်ဆက်အမျိုးအစား coercive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sadism ရောဂါ, frotteuristic ရောဂါနှင့် Non-သဘောတူညီခကျြတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သောအခြားအ paraphilic ရောဂါဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီတိုက်ပိတ်အပြုအမူပါဝင်သောသို့မဟုတ်ဖှသည်အခြား paraphilic ရောဂါအသစ်အမျိုးအစားလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး, စိတ်ကူးယဉ်, တိုကျတှနျးထားသို့မဟုတ်အပြုအမူသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲ (သို့သော်မပေးငြင်းပယ်ခံရ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ဒါမှမဟုတ် arousal ပုံစံ၏ကွောကျရှံ့ငြင်းပယ်ခံရနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါတာဝန်ပေးအပ်ရနိုင်သောပါဝင်သည် အခြားသူများ) သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရသို့မဟုတ်သေမင်း၏တိုက်ရိုက်အန္တရာယ် (ဥပမာ asphyxophilia) အပ်နှင်း။
အဆိုပါ ICD-11 အများပြည်သူကျန်းမာရေးနှင့်လက်တွေ့ psychopathology နှင့်မျှသာပုဂ္ဂလိကအပြုအမူကိုထင်ဟပ်သောသူတို့မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများအကြားခွဲခြား, ဤအကြောင်းပြချက် sadomasochism, fetishism နှင့် fetishistic transvestism ၏ ICD-10 အမျိုးအစားဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြ26.
အဆိုပါ ICD-11 ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားအပေါ်ချမှတ်ထား factitious ရောဂါအပေါ်ချမှတ်ထား factitious ရောဂါပါဝင်သော factitious မမှန်၏အသစ်တစ်ခုအာဆီယံမိတ်ဆက်။ ဤအုပ်စု (factitious ရောဂါ) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ, ရောဂါလက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်လျက်ချော့မော့၏ ICD-10 ရောဂါမှသဘောတရားအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်း feigns ရှိရာလက်တွေ့ခွအေနအေထည့်သွင်းရန်တိုးချဲ့, falsifies, ဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ induces သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ aggravates အခြားတစ်ဦးချင်းစီ (များသောအားဖြင့်ကလေးတစ်ဦး) အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပြုအမူလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ။
အပြုအမူများသည်သိသာထင်ရှားသည့်ပြင်ပဆုလာဘ်များသို့မဟုတ်မက်လုံးများကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အာရုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းကျန်းမာရေးအခြေအနေအပေါ်သြဇာညောင်းစေသောအချက်များ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ”
ICD-11 neurocognitive မမှန်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်မူလတန်းလက်တွေ့လိုငွေပြမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအခြေအနေများဝယ်ယူနှင့်လက်ခဏာ, စိတ်ရောဂါအပါအဝင် ICD-10 အော်ဂဲနစ်အကြားခွဲခြားဖြစ်ကြောင်းအများဆုံးအခြေအနေများ, ပါဝင်သည်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အာဆီယံ delirium, (ICD-10 အတွက်ပျော့သိမြင်မှုရောဂါခေါ်) အပျော့စား neurocognitive ရောဂါ, လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင်ရောဂါနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်ပါဝင်သည်။ Delirium နှင့်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင်ရောဂါကြောင့်တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးမှ, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်အများအပြား etiological အချက်တွေကြောင့်တခြားနေရာခွဲခြားဆေးပညာအခွအေနေရန်အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဖောက်ပြန်, ပျော့အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
အခြေခံ etiologies မှအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပြီးခွဲခြားထားပါသည်သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသော etiologies (ဥပမာကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါမှစိတ်ဖောက်ပြန်ကြောင့်လူ့ immunodeficiency virus ကိုမှစိတ်ဖောက်ပြန်) နဲ့ဆက်စပ်နှောက်၏ syndrome ဝိသေသလက္ခဏာများ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်အပေါ်အခန်းအတွင်းခွဲခြားနှင့်ဖော်ပြထားကြသည် သင့်လျော်သောအဖြစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ဒါမှမဟုတ် ICD ၏အခြားအပိုင်းများရောဂါများအပေါ်မျြးအခနျးကွီး,78။ အပျော့စား neurocognitive ရောဂါကိုလည်းရောဂါတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးနိုင်ရန်အတွက်ကုသမှုပေးရန်အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့အစောပိုင်းသိမြင်ကျဆင်းမှုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထောက်လှမ်းနည်းလမ်းများထင်ဟပ်တစ်ခု etiological ရောဂါနှင့် တွဲဖက်. ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ICD-11 ထို့ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်မှု, neurocognitive မမှန်များ၏အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သူတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားများအသိအမှတ်ပြုထားသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် ICD-11 CDDG ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်၎င်းတို့၏အခြေခံစာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်များသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးအတွင်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၏ပထမအကြိမ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကြုံစဖူးအဆင့်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်မှုပါ ၀ င်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သိပ္ပံနည်းကျမှန်ကန်မှုကိုလက်ရှိသက်သေအထောက်အထားများအရသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၏စနစ်ကျသောအစီအစဉ်အပေါ် အခြေခံ၍ လက်တွေ့အသုံး ၀ င်မှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးချနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခုအခါကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းအတွက် WHO အဖွဲ့ ၀ င်နိုင်ငံများမှအသုံးပြုမည့် ICD-11 အခန်း၏ဗားရှင်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏လက်တွေ့အခြေအနေများတွင်အသုံးပြုရန် CDDG နှစ်မျိုးစလုံးသည်များစွာပြီးပြည့်စုံသည်။ ICD-11 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်၎င်း၏အလားအလာများပြည့်စုံစေရန်အလို့ငှာ WHO ၏ ဦး တည်ချက်သည်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းများတွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ခွဲခြားခြင်းစနစ်အသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတွင်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းအားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ၊ ကျန်းမာရေးစနစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သောနိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးပညာရှင်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်အတွက်နည်းလမ်းများစွာကိုတီထွင်ရမည်။ WPA နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်နောက်လာမည့်လုပ်ငန်းအဆင့်တွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ပညာရေးစင်တာများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
တစ်ယောက်တည်းစာရေးဆရာများဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြအမြင်များတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့သေချာပေါက်ဆုံးဖြတ်ချက်များ, မူဝါဒဒါမှမဟုတ် WHO က၏အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ G. အ Baird, ဂျေ Lochman, LA က Clark က, အက်စ်အီဗန်, BJ ခန်းမ, R. Lewis ကတော့: အဆိုပါစာရေးဆရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့် neurodevelopmental မမှန်များ၏ ICD-11 ခွဲခြားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့သောသူသည်အောက်ပါတစ်ဦးချင်းစီမှမိမိတို့၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြ -Fernández, အီး Nijenhuis, RB Krueger, MD Feldman, JL Levenson, ဃ Skuse, MJ Tassé, P. Caramelli, HG Shah က, DP Goldberg, G. အ Andrews က, N. Sartorius, K. Ritchie, အမ် Rutter, R ကို ။ Thara, Y. Xin, G. အ Mellsop, ဂျေ Mezzich, ဃ Kupfer, ဃ Regier, K. Saeed, အမ်ဗန် Ommeren နှင့်ခ Saraceno ။ သူတို့ကအစကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး (ဤနေရာတွင်အမည်ဖြင့်မှလည်းမြောက်မြားစွာ ICD-11 အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့များနှင့်အတိုင်ပင်ခံများ၏အပိုဆောင်းအဖွဲ့ဝင်များ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် http://www.who.it/mental_health/evidence/ICD_11_contributors ) တစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံစာရင်းတွင်ပါ။